11 Facade Cladding Ceiling Sun Screen หน้ากากตึก แผ่นกั้นกรองแสง รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา - My blog
หน้ากากตึก ปิดผิวห่อหุ้มอาคาร แผ่นโลหะฉลุลายเซาะร่องตกแต่งอาคาร FACADE CLADDING | Wall PARTITION | SLIDING DOOR | WINDOWS | PERFORATED CEILING | Weathered STEEL | SHADING CORRIDOR | Aluminium COMPOSITE
บริษัทแชนคอน ผลิตและจำหน่าย หน้ากากตึก Facade Cladding ปิดผิวห่อหุ้มอาคาร แผ่นโลหะฉลุลายเซาะร่องตกแต่งอาคาร Perforated Expanded Metal เราสร้างนวัตกรรมจากความคิดทางสถาปัตยกรรมด้านงานโลหะแผ่นและงานดีไซน์บนพื้นผิวเรียบให้เกิดรูปทรงตามจินตนาการของผู้ใช้งาน รองรับการผลิต ฉลุ ตัด พับ ขึ้นรูปวัสดุที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น งานเจาะรูเซาะร่องบนพื้นวัสดุ อลูมิเนียมคอมโพสิต เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง และอื่นๆ สำหรับแผ่นปิดผิวอาคาร หน้ากากตึก ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง ด้วยความเป็นมืออาชีพและเทคโนโลยีของเราจะทำให้งานปิดผิวอาคารลงตัวกับทุกอาคารด้วยงานประกอบที่ไม่เหมือนใคร แข็งแรงทนทานด้วยชุดโครงสร้างที่ผ่านการคำนวณมาแล้วเป็นอย่างดี น้ำหนักเบา พร้อมรับงานฉลุ ตกแต่งรวดลายอาคาร หลายรูปแบบ
Chanon manufactures and sells Facade Cladding facade closers. Perforated Expanded Metal Perforated Perforated Slabs We innovate from the architectural concept of sheet metal work and design onasmooth surface to create the imagination of the user. Materials for various types of work such as punching grooves on the floor materials, aluminum composite, aluminum, stainless steel, brass, copper and other for the mask cover. Building Ceiling Curtain Wall Fence rail partition partition. Awesome! Hinged hinge, ivy wall With our professionalism and technology, we are able to make every effort to cover the building surface with every piece of work. Robust withawell-structured set that is well-balanced and lightweight. Decorate many designs.
1. รับประกันคุณภาพสินค้า5ปี / Warranty5years Certificate
2. มีฐานลูกค้าในประเทศ ที่ใช้งานแล้วมากกว่า 100 บริษัทชั้นนำรับรอง
3. สินค้านำเข้า วัสดุ เกรดเอ Food-Grade Vinyl Resin
4. เป็นบริษัทผู้ผลิตและนำเข้าที่ตรวจสอบได้ มีผลประกอบการกว่า 10 ปี
5. มีสต๊อคพร้อมส่งและบริการได้ทันทีกว่า 3,000 ตรม. มีสีให้เลือก
6. เป็นผู้ผลิตงานตะแกรง7แบบ และ3 ชนิดฝาบ่อ กว่า5วัสดุสำเร็จรูป
Quality, Service and Warranty Fiberglass Grill From the chanel
Warranty5years Certificate
2. Hasadomestic customer base. Used by more than 100 leading companies.
3. Import food grade Grade Vinyl Resin Food-Grade
4. A manufacturer and importer who can verify. Over 10 years
5. Have stock ready to send and service more than 3,000 square meters.
6. Produce7types of grilles and3types of wells.
คุณสมบัติของหน้ากากตึก ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง Fa?ade Cladding & FRP Sun Screen Specification
1. วัสดุตกแต่งหน้ากากตึก มีหลากหลายวัสดุให้เลือก ได้แก่ แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส แผ่นกันแดดพลาสติก แผ่นเจาะรูเซาะร่องจากวัสดุ เหล็ก อลูมิเนียมคอมโพสิต สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง
2. รูปแบบช่องตะแกรงชิ้นงาน: มีหลากหลายแบบช่องรู(Mesh/Hole) โดยทั่วไปมาตรฐานเป็นช่องรูกลมสำหรับแผ่นวัสดุอลูมิเนียม หรือชิ้นงานไฟเบอร์กล๊าสออกแบบเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบมาตรฐานคลาสสิค นอกจากนี้สามารถเซาะร่องฉลุลายได้ตามสั่งสำหรับชิ้นงานแผ่นวัสดุ
3. คุณภาพวัสดุ Quality Material: มีทั้งแบบคุณภาพสูงโดยใช้ วัสดุที่ผลิตจากไฟเบอร์กล๊าส FRP และ Aluminium อายุใช้งาน ไม่เป็นสนิม ผุกร่อน ทนแดด ฝน ทุกสภาพอากาศ
4. ความหนาของแผ่นฝ้าผนังตะแกรงแขวน (Thickness): ตั้งแต่ 1-13mm. แข็งแรงมาก น้ำหนักเบา ไม่แตกร้าว ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม สามารถประยุกต์ใช้เป็น ทั้งผนังเบา ฝ้าเพดาน และหน้ากากตึก
5. การผลิตแผ่นไฟเบอร์กล๊าส ใช้วิธีการผสมสีเข้าไปในชิ้นงานผสมกับเรซิ่นแล้วเทลงในแบบ หรือใช้เครื่องฉีดเป็นแผ่นตามแม่แบบในกรณีวัสดุเป็นฝ้าผนังตะแกรง PP หรืออลูมิเนียมใช้เครื่องฉลุลายเซาะร่องขึ้นรูป
6. ขนาดมาตรฐานสำหรับแผ่นหน้ากากตึก แผ่นฝ้าผนังอลมิเนียมมีขนาดมาตรฐาน 1.2×2.4M. และแผ่นฝ้าผนังหน้ากากตึกสำหรับตะแกรง FRP มีขนาดมาตรฐานใหญ่มากถึง 120x400cm. โดยสามารถสั่งตัดได้ตามที่ต้องการ
7. กำหนดรูปแบบเองได้ตามที่สถาปนิกออกแบบ เช่น เลือกสี (Colorful) สั่งตัดตามขนาด(Size made to order) เลือกรูช่องตะแกรง(Various Mesh size)
Features of Building Masks Ceiling Curtain Wall Fence rail partition partition. Awesome! Façade Wall Cladding & FRP Sun Screen Specification
1. Building Mask Material There areavariety of materials to choose from. Fiberglass mesh Plastic Shield Bore grooves made from composite aluminum, stainless steel, brass, copper.
2. Grid pattern: There areavariety of holes (Mesh / Hole). In general, the holes are round holes for aluminum sheet material. Fiberglass design isaclassic square. In addition, the groove can be customized for the sheet material.
3. Quality Material: The quality is high quality. Fiberglass, FRP and Aluminum materials are used in all weather conditions.
4. Thickness: Thickness: 1-13mm. Very strong, lightweight, no rusting, chemical resistant, rustproof. Can be used asalight wall, ceiling and mask.
5. Fiberglass Fabrication Apply the paint mixture to the resin mixture and pour it into the mold. In case of material is frosted, PP or aluminum screen is used.
6. Standard Size for Building Block Mask Aluminum wall with standard size 1.2×2.4M and FRP screen wall cover for standard size up to 120x400cm, can be cut to desired size.
7. Customize the design by the designer, such as color (Colorful made to order), select the mesh size (Various Mesh size)
ประเภทและขนาดของตะแกรงบังตากันแดด หน้ากากตึกปิดผิวห่อหุ้มอาคาร แผ่นโลหะฉลุลายเซาะร่อง | Facade Cladding | Aluminium Sun Screen Grilles Specification
1. แผ่นอลูมิเนียมฉลุลายเซาะร่อง หนา 1.5 mm. ช่องรู 20/40/60 มม. แผ่นมาตรฐาน 1.2×2.4 เมตร Perforated Aluminium Compososite Facade thick 1.5mm. Hole 20/40/60mm. size 1.2×2.4 M.
2. แผ่นเพ็คบอร์ดอลูมิเนียมฉลุลายเซาะร่อง หนา 1.5 mm. ช่องรู5มม. แผ่นมาตรฐาน 1.2×2.4 เมตร Perforated Aluminium PegBoard thick 1.5mm. Hole5mm. size 1.2×2.4 M.
3. ตะแกรงบังตากันแดดFRP ช่องรู 50x50mm. สูง 13mm. แผ่นมาตรฐาน 1.2 x4เมตร
FRP Mold Grating size 50x50x13mm. | Standard size 1.2 x 4.0 Meters
4. ตะแกรงบังตากันแดดFRP ช่องรู 38x38mm. สูง 13mm. แผ่นมาตรฐาน 1.2 x4เมตร
FRP Mold Grating size 38x38x13mm. | Standard size 1.2 x 4.0 Meters
5. ตะแกรงบังตากันแดดFRP ช่องรู 83x83mm. สูง 25mm. แผ่นมาตรฐาน 1 x4เมตร
FRP Mold Grating size 83x83x25mm. | Standard size 1.0 x 4.0 Meters
6. ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ 60×120ซม. ความหนาและช่องรู 12.7มม. | Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel
Peforated Aluminium Metal Material for Facade Cladding Design Ideal ไอเดียการออกแบบวิธีการเจาะรูเซาะร่องของแผ่นอลูมิเนียมเหล็กสำหรับหน้ากากตึกผนังกั้น
การออกแบบแผ่นเจาะรูเซาะร่องสำหรับหน้ากากอาคารตึก แผ่นกั้นพาร์ทิชั่นกรองแสง ผู้ใช้งานควรจะต้องทำความเข้าใจและเตรียมข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้
1. Panel(WxL)/ขนาดของแผ่น : โดยมาตรฐานแผ่นมีขนาด 1.2 x 2.4 เมตร (2.88ตรม.)
2. Thick/High/ความหนาของแผ่นวัสดุ : เพื่อความแข็งแรงของหน้ากากตึกแผ่นกั้นกรองแสง ควรเลือกวัสดุหนา 1.5 มม. ขึ้นไป
3. Hole/Mesh/ช่องรู : สามารถออกแบบช่องรูแบบกลม สี่เหลี่ยม แต่ที่นิยและดูเข้ากันกับสถาปัตยกรรม ควรเป็นช่องรูกลมสลับเล็กใหญ่
4. Pitch/Center/ระยะห่างระหว่างตรงกลางช่องรู : เป็นระยะห่างระหว่างรู โดยวัดตำแหน่งที่ตรงกลางรู ยิ่งช่องว่างน้อยจะทำให้มีช่องเปิดมากขึ้น (%Open Area)
5. Edge/Margin/ระยะขอบถึงช่องรู : วัดจากขอบมุม ถึงขอบรู ทั้งสี่ด้าน
6. Degree/มุมของแต่ละช่องรู : มีหลากหลายมุม แต่ที่นิยมได้แก่ 90, 60, 45 องศา
7. Folding/การพับขอบ : เป็นวิธีการทำกรอบให้ดูลอยมีมิติ และเก็บมุมสวยงาม
8. Color/การเคลือบสี : เลือกสีสรรได้ หรือเปลือยผิวโชว์ความดิบของเนื้อวัสดุ เช่นผิวอลูมิเนียมดูเงางามแวววาว
Design of groove for building block Partition filter, light filter Users should understand and provide the following important information:
1. Panel (WxL) / Sheet Size The standard size is 1.2 x 2.4 meters (2.88 sq.m.).
2. Thick / High / Thickness of Material Sheets : For the strength of the mask block, filter the light. Chooseamaterial that is 1.5 mm thick.
3. Hole / Mesh / hole : Can designarectangular hole, but at the same time and look compatible with architecture. Should beasmall round hole.
4. Pitch / Center / Middle hole : Is the distance between holes. Measure the position in the middle of the hole. The smaller the gap, the greater the open area (% Open Area).
Edge / Margin / Edge to hole Measured from the corner to the edge of the four holes.
6. Degree : There are many angles. But popular ones are 90, 60, 45 degrees.
7. Folding : How to makeaframe to see the floating dimension. And keep the beautiful angle.
8. Color : Choose colors. Nude or bare skin show the raw material. The surface is glistening aluminum.
FACADE Cladding หน้ากากอาคาร ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง :
บริษัทแชนคอน รับสร้างลวดลายเป็นแผ่น อลูมิเนียมคอมโพสิต และโลหะทุกชนิด แปลงแผ่นปิดผิวอาคาร หน้ากากอาคาร FACADE cladding ของคุณให้เป็นงานดีไซน์ ผลิตฟาสาด หน้ากากอาคาร หุ้มอาคาร BuildingFacade ผนังตกแต่งเซาะลาย grille ผนังตกแต่งฉลุลาย ฉลุลายทุกชนิด ฉลุ Wave board ผนัง3มิติ 3D Curve Board ผนังตกแต่งเซาะลาย grille ผนังตกแต่งฉลุลาย ด้วยวัสดุ MDF สำหรับตกแต่งภายใน งานฝ้าตกแต่ง งานประกอบตู้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว งานตกแต่งร้านค้า ร้านอาหารและงานตกแต่งบ้าน โรงแรม คอนโดและอพาร์ทเมนต์ ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ตาข่ายทำรั้ว ตะแกรงรูกลม ตะแกรงรูยาว ตะแกรงระบายน้ำ ตะแกรงสแตนเลสเจาะรู ปั๊มรูกลม ตาข่ายทำรั้ว ตาข่ายกันนก แผ่นปั๊มลายนูน แผ่นลายกันลื่น PUNCHING PERFORATED METAL แผ่นสแตนเลสฉลุลาย งานบ้านและสวน ตะแกรงตกแต่งอบสี Functioning FACADE master รูยาวรูสล็อต slot hole รูลายแคปซูล hole capsules ตะแกรงรูยาวขอบมน รูหกเหลี่ยม วัตถุดิบแผ่นเรียบ แผ่นเหล็กดำเรียบเจาะรู แผ่นทองเหลืองเจาะรู แผ่นสังกะสีเจาะรู แผ่นพีวีซีเจาะรู แผ่นไม้เจาะรู แผ่นคอมโพสิตเจาะรู แผ่นพลาสติกเจาะรู แผ่นยิปซัมเจาะรู แผ่นสมาร์ทบอร์ดเจาะรู แผ่นอโลหะทำให้เป็นรู รูลายรังผึ้ง Holes honey รูพิเศษตามแบบต่าง ๆ
Chanon Company createsasheet pattern. Aluminum Composite And all kinds of metal. Transform your FACADE cladding facade cover intoadesign job. Fabricateafacade mask to protect your building. Decorative wall grille wall decoration Wave board Wave wall 3D Wall 3D Curve Board wall decoration grille wall decoration decorated with MDF material for interior decoration decorative furniture cabinet floating furniture. Shop Decoration Restaurant and home decoration, hotel, condo and apartment, easy to install, light weight, mesh, fence, sieve, round hole, sieve, long hole, drainage grid Stainless steel mesh drill hole pump round hole netting bird netting embossed plywood. PUNCHING PERFORATED METAL STAINLESS STEEL PATTERN Home and gardening Functioning FACADE master slot hole hole slot hole hole capsule hole capsule Black steel plate Brass sheet Zinc plated PVC Sheet Wood Composite sheet Plastic sheet Gypsum board Smart board Non-metallic honeycomb hole Holes honey inavariety of ways.
Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat blinds/ Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling
Building Facade Cladding Sun Screen หน้ากากตึกแถวอาคารสำนักงาน ทุกคนมองตะแกรงเหล็กฉีกอาจจะดูแข็งและเข้ารูปยาก คุณจะรู้มัยว่าตะแกรงเหล็กฉีกมีประโยชน์หลายอย่างตอนนี้ก้าวล้ำ จนคิดไม่ถึงว่าตะแกรงเหล็กฉีก ก็สามารถทำได้สาระพัดประโยชน์ แค่ลองนึกภาพจินตนาการตาม….การที่จะนำตะแกรงเหล็กฉีกมาทำเป็นหน้ากากอาคาร สามารถพับเป็นบานหน้าต่างรับแดด เมื่อกางออก เจ้าตะแกรงเหล็กฉีก ก็ยังสามารถช่วยบังแดด ให้กับภายในตัวอาคารได้อีกด้วย เมื่ออยู่ภายในอาคารจะทำให้รู้สึกสบายตามากยิ่งขึ้น แล้วด้วยลวดลายของเจ้าตะแกรงเหล็กฉีก ช่วยให้ตึกอาคาร ดูน่าสนใจ มากขึ้น ตะแกรงเหล็กฉีก หน้ากากอาคาร สามารถใช้บังตา และยังใช้กันแดดได้อีก ตะแกรงเจาะรู หรือเหล็กแผ่นเจาะรู เกิดจากการนำแผ่นโลหะมาปั๊มเจาะรูตามลวดลายเฉพาะ เช่น รูกลม รูสี่เหลี่ยม สามารถกำหนดขนาดของรู ระยะห่างระหว่างรู และมุมของแนวปั๊มเจาะรูได้ เช่น ตะแกรงคัดข้าวหรือตะแกรงขัดสีเมล็ดข้าวทำเป็นแผ่นหรือท่อระบายความร้อนอุปกรณ์ตกแต่งภายใน ออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ ฉากหรือผนังกั้นห้องชั้นวางของหรือตะแกรงหุ้มสายพาน รั้วกำแพงบ้าน เป็นต้นเหมาะกับบ้านทันสมัยใหม่ อลูมิเนียมคอมโพสิต วัสดุสุดแสนคลาสสิคที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็พบเจอได้อย่างมากมายทั่วไปจริงๆ ซึ่งจะมองกี่ทีไอ่แผ่นเรียบๆเหล่านี้ก็ดูเฉยๆเชยๆไปซะแล้วในสายตาหลายคน เพราะงั้นการสร้างสรรคเอกลักษณ์จากวัสดุนี้จึงมีน้อยมากๆ ได้แต่ด้วยนวัตกรรมล้ําสมัยที่สามารถสร้างสรรคการออกแบบได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานในลักษณะ #การฉลุลาย,#การพั้นรู,#หรือสร้างงาน3มิติ ก็สามารถตอบโจทย์การออกแบบต่างๆของ สถาปนิกหรือดีไซค์เนอร์ ได้มากยิ่งขึ้น เราสนันสนุกให้คิดอย่าง อิสระ..ไร้ขอบเขต…ไร้คำว่าเป็นไปไม่ได้
Building Facade Cladding Sun Screen Masks Closings Every office building looks likeatorn steel grating. It may look hard and difficult to form. You know the iron grates are torn. There are many benefits to this progressive. I do not think that iron grates tear. You can do it. Imagine the imagination … to bringagrating iron to tear the building. It can be folded into the sunlight when it unfolds. It can also help to shade. To the building as well. When inside the building will make you feel more comfortable. And with the pattern of your grating iron grates. Help the buildings look more attractive. Steel grating tear the building can use blinds. And also use the sunscreen to drill holes or steel plates. The hole is drilled byaspecific pattern such as holes, holes, squares can determine the size of holes. Distance between holes And the angle of the drill hole, such as rice sieve or rice grating plate or cooling tube. Design is furniture. The room or partition, shelf or sieve. Wall fence Suitable for modern home. Aluminum Composite Classic stuff, wherever you go, you can findalot of them. This will look atafew simple plates, it looks so cool already in the eyes of many people. So the creation of the identity of this material is very little. But with the innovation that can create more and more designs. Whether it is to createajob. # Declaration, # Punching, # Creating 3D It can answer the design problems. Architect or designer More We are fun to think. I do not know what to say.
แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง PP/FRP Open Cell Ceiling
แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง Chancon ผลิตจาก ทั้งวัสดุ ไฟเบอร์กล๊าส และ พลาสติค Poly Propylene คุณภาพพิเศษ ซึ่งแข็งแกร่งทนทานและน้ำหนักเบา โดยผ่านกรรมวิธีการผสมแม่สีเข้าไปในชิ้นงานโดยตรงไม่ใช่เพียงแค่เคลือบผิวไว้ แล้วนำไปเทในแม่แบบ (Mould Grating) ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีสรรได้เองหลากหลาย ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการตกแต่งภายในแต่ละอาคาร มีให้เลือกใช้ ทั้งแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส และแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า นอกจากขนาดและสีสรรที่ เราสรรค์หามาให้สถาปนิกเป็นผู้บรรจง เลือกตกแต่งและดัดแปลงเพื่อสร้างความหรูหราภายในอาคารแล้ว
Chancon Ceiling Wall Panels are made from high quality fiberglass material and Poly Propylene plastic which is durable and lightweight. Through the process of mixing the mother into the work directly, not just coating. And then pour into the template (Mold Grating) customers can chooseavariety of colors. Suitable for interior decoration of each building. Available The square. And rectangular In addition to size and color. We are looking for architects to elaborate. Choose to decorate and adapt to create luxury in the building.
อาคารโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CELLING) ทำเป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคารซึ่งนอกจากจะสร้างความสง่าแปลกตาล้ำสมัยแล้ว ฝ้าตะแกรงแบบนี้ ยังสามารถแก้ปัญหาความเรียบ ภายในอาคารให้เกิดลวดลายและจังหวะของเส้นสายที่ต่อประสานกันอย่างเหมาะสม ฝ้าตะแกรงยังมีคุณสมบัติที่สามารถ ปรับให้เข้ากับพื้นที่ทุกรูปแบบ ไร้รอยต่อ เพื่อสร้างความ สวยงามสง่าได้ทุกมุมมอง ให้ความรู้สึกแข็งแรงคงทนในทุกๆช่อง ทำให้ช่องว่างเกิดความเป็นมิติ ฝ้าเพดานแบบตะแกรงมีความแข็งแรงทนทานสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือถอดประกอบได้ง่าย สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สดใส สีไม่ลอก ไม่สกปรก ทำความสะอาดและติดตั้งง่าย ไปถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องพักผู้โดยสาร สระว่ายน้ำ ห้างสรรพสินค้า โรงจัดแสดง สถานีรถ โชว์รูมรวมถึงสถานที่อื่นๆ
Generally, aluminum glazing (CELL CELLING) is used asaceiling. Inside the building, in addition to creating exquisite elegance. This grille. Can solve the problem smooth. Inside the building give the pattern and rhythm of the connecting lines properly. The grill also has features that can Adapt to all areas seamlessly to create. Beautiful, all the views. Feel strong in all channels. Make the spaceadimension. Grate ceiling with high durability. The special feature is easy disassembly. Can be decorated with bright colors, no stripping, no dirty, clean and easy to install. Go to other effects. Suitable for guest rooms, swimming pools, shopping malls, exhibits, bus stations, showrooms, as well as other places.
แผงกันแดด กันสาดโปร่งแสง Sun Screen | Weatherboard | Colorful Trellis Shade
แผงบังตา แผงบังแดด ระแนงบังตา กันสาด ระแนงไม้เทียม ฉากกั้น ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้บ้านคุณ โดยไม่สร้างความทึบให้หนักเกินไป การใช้แผงกันแดดโปร่งแสงที่มีรูปแบบเฉพาะ จะสร้างบรรยากาศอันรื่นรมย์สบายสบายให้กับบ้านหรือออฟฟิศของท่าน ทำให้สามารถแบ่งโซนหรือแยกส่วนการใช้งาน และการตกแต่งที่แตกต่างได้ภายในพื้นที่เดียวกัน มีความคงทน ไม่เจอปัญหาผุกร่อน และดูไม่จำเจ ดังเช่น วัสดุที่ทำมาจากเหล็กเมทัลชีทหรือหลังคากระเบื้องไยหินทั่วไป ให้ความรู้สึกที่ดูเหมือนใหม่มีสีสรรเสมอ และด้วยคุณสมบัติที่ไม่เกาะฝุ่น ไม่ฝังคราบสกปรก จึงทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด เพียงใช้น้ำสบู่อ่อนๆกับผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาด แผงกันแดดของคุณก็จะแลดูสดใสเหมือนใหม่ ไม่ว่าจะนำไปติตั้งตั้งภายนอกบ้าน เช่น บริเวณโรงจอดรถ ห้องครัว หรือสวนอันรื่นรมย์ของบ้านคุณ หรือ ตั้งภายในบ้านก็ยังคงความสวยงามได้เช่นกัน
blinds, wooden blinds. Do not create too much opacity. The use of specialized translucent sunblocks. It will createacomfortable atmosphere for your home or office. It can be divided into zones or use. They are durable, weather resistant and non-monotonous, such as materials made of steel, sheet metal or tile roofs. Feel likeanew color always. And with no dust. Do not bury the stain It makes it easy to clean. Use mild soap with clean cloth. Your sunscreen will look as bright as new. Whether it is to set up outside the house, such as the garage, kitchen or garden of your home or home is still beautiful as well.
“กันสาด” นับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบเติมเต็มของบ้านที่นอกจากจะติดตั้งเพื่อการป้องกัน แดดฝน หลายคนยังเลือกติดตั้งเพื่อความสวยงามอีกด้วย ปัจจุบันกันสาดสามารถเลือกได้จากรูปแบบ รูปทรง และวัสดุที่สามารถเชื่อมโยงกับบ้านได้อย่างหลากหลาย เพราะนอกจากกันสาดจะให้คุณประโยชน์ในด้านการใช้งานแล้ว รูปแบบของกันสาดที่เหมาะสม เข้ากับตัวบ้านได้ดี ก็จะทำให้บ้านดูสวย น่ามองตั้งแต่ระยะไกลก็ว่าได้ หลังคากันสาดโดยทั่วไปมักออกแบบแบบให้ทึบปิดสนิท ยิ่งถ้าใช้งามร่วมกับผนังฝาบ้านทึบปิดทุกด้านแล้วยิ่งทำให้ไม่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ภายในห้องนั้นก็จะร้อนอบอ้าว อุณหภูมิสูง รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องอาศัยอยู่ การออกแบบหลังคากันสาดแบบใหม่ ถ้าไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่นั้นต้องแห้งสนิทแล้ว ควรออกแบบให้เป็นลักษณะโปร่งแสงแต่บังแดดได้
รูปทรงของหลังคากันสาดนอกจากด้านความสวยงาม รูปแบบยังมีผลในการกำหนดอุณหภูมิในบ้าน กล่าวคือช่วยทำให้บ้านเย็นได้ด้วย โดยเฉพาะแบบบ้านในยุคปัจจุบันที่เน้นหน้าต่างและประตูเป็นกระจกเพื่อเน้น ความโปร่งโล่งสบายตา แต่ละมุมได้รับทิศทางแดด และฝนไม่เหมือนกัน นั่นจึงทำให้เจ้าของบ้านควรให้ความสำคัญในการเลือกรูปแบบของกันสาดก่อน ตัดสินใจสร้างหรือติดตั้ง เพื่อประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบและความเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ 1. กันสาดทรงโค้ง สมัยก่อน กันสาดแบบโค้งจะไม่สามารถใช้กับกระเบื้องหลังคาทั่วไปได้ เนื่องจากแผ่นกระเบื้องโดยทั่วไปไม่รองรับความโค้งงอ แต่แผ่นฝ้าเพดานตะแกรงของบริษัทฯ สามารถออกแบบให้ดูเรียบหรูและสีสันที่สวยสะดุดตา ที่สำคัญสามารถนำไปตัดให้เข้ารูปโค้งงอได้ จึงทำให้กันสาดทรงนี้เหมาะกับบ้านสไตล์ Modern Luxury 2. กันสาดทรงตรง นิยมใช้ในแบบบ้านสไตล์ Classic and Contemporary โดยมีลักษณะหลังคาที่ยกให้อีกด้านสูงกว่าอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถบังแดดและระบายน้ำฝนได้ดี การออกแบบก็จะใช้โครงเหล็กรับแผ่นกันสาด หรือทำเป็นฝ้าเพดานแขวนห้อยยึดจากเพดานของตัวบ้าน
หลังคากันสาดโดยทั่วไปมักออกแบบแบบให้ทึบปิดสนิท ยิ่งถ้าใช้งามร่วมกับผนังฝาบ้านทึบปิดทุกด้านแล้วยิ่งทำให้ไม่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ภายในห้องนั้นก็จะร้อนอบอ้าว อุณหภูมิสูง รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องอาศัยอยู่ การออกแบบหลังคากันสาดแบบใหม่ ถ้าไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่นั้นต้องแห้งสนิทแล้ว ควรออกแบบให้เป็นลักษณะโปร่งแสงแต่บังแดดได้
The shape of the canopy roof in addition to the beautiful. Patterns also contribute to determining the temperature in the home. This is to help keep the house cool. Specifically, the house in the present day highlighted windows and doors asamirror to emphasize. Airiness Each corner receivesasunny direction. And the rain is not the same. That is why homeowners should focus on the choice of awning before. Decide to create or install. 1. Awning curved front arch awning can not be used with common roof tiles. Because tiles generally do not support curvature. However, the ceiling plate of the company. Can be designed to look elegant and colorful eye-catching. The key can be cut intoabend. This style is suitable for Modern Luxury. 2. Awning style is used in the style of Classic and Contemporary style with the roof to the other side higher than the other. To be able to shield and drain rain. The design will useasteel frame to receive the awning. Or hanging ceiling suspended from the ceiling of the house.
Roof canopy is generally designed to be solid closed. If the beauty of the wall with solid walls closed all the way to the air. The room is hot, high temperature, feel uncomfortable when living. New Canopy Roof Design If you do not have to worry about the area must be dry. Should be designed to be translucent, but can be sun visor.
VENTILATED PEFORATED FACADE CLADDING ทำจากอลูมิเนียม2มม พ่นสีอคริลิค แบบเงาวาว ต้องแสงเล่นไฟตามองศาของแสงแดดในแต่ละช่วงเวลา เรียกแขกด้วยการแสงสะท้อนก่อนที่จะบอกความเป็นตัวตนด้วยการใช้ Space บนตัวอาคารเล่าเรื่องราวทางธุรกิจ เรียบๆ สั้นๆ ง่ายๆ ได้ใจความอย่างมีพลัง ติดต่อเราเพื่อพัฒนารูปแบบการตกแต่งอาคาร และสิ่งก่อสร้างของคุณด้วย Facade ที่เป็นตัวคุณ
VENTILATED PEFORATED FACADE CLADDING is made of 2mm acrylic spray painted acrylic light to play the light in degrees of sunlight in each period. Call the guests withaglimpse before telling the person they are using Space on the building. Briefly tellasimple business story. Contact us to developadecorative design. And your building withafacade that is yours.
รั้ว ราวกันตก แผงกั้นพาร์ทิชั่น
FRP Fence, Colorful General Screen Partition
เรามิได้นำเสนอแค่การแบ่งพื้นที่ต่างๆของบ้านหรือออฟฟิศ เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับอาณาบริเวณของบ้านเท่านั้น แต่ยังคงคำนึงถึงความสวยงามที่จะส่งเสริมหน้าตาให้กับบ้านของท่าน เช่นเดียวกัน ด้วยตระหนักถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ จึงมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ฉากแผ่นฝ้าผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง มากหลากหลายแบบ แต่ละแบบมีความสวยสดใส มีดีไซน์ใหม่ไม่ซ้ำใคร พร้อมกันนี้ยังให้อิสระกับท่านเจ้าของบ้าน และ สถาปนิก ในการสร้างสรรค์ ออกแบบได้ตามความต้องการใช้งานและความชื่นชอบแต่ละบุคคลได้อีกด้วย ยังสามารถนำมาตกแต่งภายในสวน หรือ บริเวณบ้าน ช่วยเพิ่มสีสันให้กับตัวบ้านได้อย่างทันสมัยลงตัว
We do not present just the space of the home or office. To add privacy to the home area only. But still consider the beauty to promote your home with the same recognition of these things. So there are products that are about. Curtain wall curtain Fence rail partition partition. Awesome! Hinged hinge, ivy wall A lot of variety Each one is beautiful. New design is unique. It also gives homeowners and architects the freedom to create. Designed to meet the needs and individual preferences as well. It can be decorated in the garden or home to enhance the color of the home is modern.
ซุ้มไม้เลื้อย ระแนง ฉากกั้นตกแต่ง
Slat blinds, Mini decorative grating Curtains
คืออีกลูกเล่นหนึ่งของการจัดสวนไม่ว่าจะใช้เพื่อให้ต้นไม้เกี่ยวเลื้อย หรือนำมาติดตั้งเป็นฉากกั้น หรือทำเป็นสิ่งตกแต่งภายในสวน อีกทั้งยังนำมาเป็นกำแพงลอยสำหรับจัดสรรพื้นที่ในสวนได้เช่นกัน ไม่ต้องกังวลปัญหาผุกร่อนอย่างเช่นระแนงไม้อีกด้วย ด้วยคุณสมบัติเด่นมากมายเหล่านี้ ท่านสามารถใช้ประโยชน์ ระแนงพลาสติกหรือไฟเบอร์กล๊าสของเราได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ง่ายต่อการทำความสะอาด มีมากหลากหลายแบบ แต่ละแบบมีความสง่างาม มีดีไซน์ใหม่ ไม่ซ้ำใคร
Another feature of gardening is that it is used to keep the creepers. Or installed asapartition. Or makeagarden decoration. It is also used asafloating wall to allocate space in the garden as well. Do not worry about corrosion problems such as wood battens as well. With many of these features. You can take advantage. Our plastic or fiberglass leds are the most cost effective. Easy to clean There are many variations. Each model is elegant withaunique design.
ซุ้มไม้เลื้อย ระแนง ฉากกั้นตกแต่ง ระแนงไม้ของแชนคอน ผลิตจากFRPไวนิลคุณภาพสูง ทำให้ตัววัสดุสามารถทนทานต่อสภาพอากาศในประเทศไทยได้ดี ไม่แตกหัก โก่งงอ หรือบิดตัว สีไม่ลอกร่อน แม้ต้องสัมผัสแสงแดดแรง เพราะผสมสีเกรดพิเศษลงไปในเนื้อวัสดุ ตั้งแต่กระบวนการผลิต ไม่เกิดการบวมพองอันเกิดมาจากน้ำฝนและความชื้น ไม่ต้องเสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์นี้นอกจากตัวFRPไวนิลคุณภาพดีแล้ว เรื่องการติดตั้งก็ทันสมัย ผ่านการคิดค้นและพัฒนาเพื่อช่วยให้ติดตั้งง่ายและสะดวกขึ้น จึงให้งานระแนงสวยเนี้ยบดั่งใจ ไม่ทิ้งรอยสกรูให้เห็น ไม่เสียเวลาเก็บงานสี หรือทาสีทับ
ระแนงไม้ของแชนคอนสามารถนำไปทำเป็นระแนงบังตา ระแนงบังแดด บังแอร์ กั้นพื้นที่ หรือรั้วระแนงบนกำแพง ทั้งยังสร้างสรรค์ได้มากกว่า 100 รูปแบบรองรับทุกความต้องการ เฉี่ยวทันสมัยแบบ Modern สวยงามร่วมสมัยแบบ Contemporary หรือใกล้ชิดธรรมชาติสไตล์ NaturalIvy curtain decorative block Shantong’s wooden battens Made from high quality FRP vinyl. The material can withstand the weather in Thailand is not broken, bent, twisted or twisted color, not to glide, even exposed to strong sunlight. Because of the special color mixture into the material. Since the production process No swelling caused by rain and humidity. No need to waste time or maintenance costs throughout the service life. The quality of FRP vinyl is very good. The installation was modern. Through innovation and development, to simplify and simplify installation. The lathe works beautifully. Do not leave the screws to see. Do not waste time storing or painting.
Shanton’s lattice battens can be used to make lattices, lattices, sunblinds, space barriers, or fences on walls. It also creates more than 100 styles for every requirement. Modern, Contemporary, Contemporary or Natural.
ระแนงไม้ นอกจากจะช่วยกันแดด กันฝน ระบายอากาศ และเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับภายในตัวบ้านแล้ว ก็ต้องยอมรับว่า ในหลายๆโอกาส ระแนงไม้ยังเป็นส่วนประกอบของบ้าน ที่ทำให้บ้านดูสวยงาม มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะบ้านในสไตล์ร่วมสมัยและสไตล์โมเดิร์นที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน สไตล์บ้านในปัจจุบันมักจะเน้นเปิดโล่ง เปิดรับลมและแสงสว่าง ให้ภายในเชื่อมโยงกับภายนอก ให้การใช้ชีวิตได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ระแนงไม้จึงถูกนำมาใช้ในส่วนของหลังคา แผงบังตา รวมไปถึงแผงตกแต่งผนังเพื่อความสวยงาม รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในสวน อย่างรั้วไม้ ซุ้มระแนงไม้ ศาลาไม้ ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารและต้องสัมผัสกับสภาพอากาศร้อนและชื้นจัดเป็นเวลานานๆ ไม้จริงตามธรรมชาติจึงประสบกับปัญหาผุ พัง โก่ง งอ สีลอกร่อน แล้วยังถูกปลวกกินอีก ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามาก และต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นเรื่องน่าปวดหัว สำหรับคนยุคนี้ ที่ไม่ค่อยมีเวลา ..ไม้ระแนงที่ทำจากพลาสติก PP หรือ FRP จึงเป็นทางเลือกสำหรับงานระบบระแนงที่กำลังได้รับนิยมอย่างสูง
The wooden battens will also help to protect the sun from rain, air, and privacy. It must be admitted that on many occasions the wooden battens are also components of the house. Makeahome look beautiful. Interesting. Especially houses in contemporary style and modern style that are popular in the present. Modern home styles tend to be open. Open air and light Provide internal linkage with external To live closer to nature. For this reason, lattice slats are used in the roof panel, as well as decorative panels. Wood furniture, wooden slats, wooden pavilions, all outside the building, and exposed to hot and humid weather for long periods of time. The real wood is naturally faced with the problem of bruising, bending, peeling and then being eaten again. It costsalot of maintenance. And care must be taken regularly. It isapain. For the people of this era. I do not have time Lath is made of PP or FRP plastic, so it is an option for the popular lathe system.
พาร์ทิชั่น ผนังเบา แผงกั้นห้อง บังตา สิทธิบัตรเฉพาะของบริษัทแชนคอน Patent PP Grating and FRP Grilles
ผนังเบาแผงกั้นห้อง เป็นทางเลือกสำคัญสำหรับการต่อเติมบ้าน เพราะผนังเบากั้นห้อง เป็นผนังสำเร็จรูปที่มีความแข็งแรงทนทานไม่แพ้การก่อผนังด้วยปูนซีเมนต์ ผนังเบาเป็นผนังที่ใช้ในการกั้นห้องไม่ต่างจากการก่อกำแพงด้วยปูนซีเมนต์ แต่ผนังเบาทำจากวัสดุที่มีความเบาตามชื่อเรียก โดยมีโครงสร้างภายในที่ทำด้วย ไม้ อะลูมิเนียม หรืออื่น ๆ และนำแผ่นไฟเบอร์หรือยิปซัมมาปิดทับ โดยสามารถนำมาเสริมเพิ่มเข้าไปทีหลัง หากต้องการกั้นห้องใหม่ และไม่ต้องใช้คานมารองรับเหมือนกับผนังหนักอย่างปูนซีเมนต์หรือผนังก่ออิฐ และผนังเบาควรมีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
Wall light partition room It is an important choice for home improvement. Because the wall light barrier room. The wall is finished with strength and durability without cement wall. Lightweight walls are used to block the room, not to formawall with cement. But the light wall is made of lightweight materials by name. The internal structure is made of aluminum or other wood and the fiber or gypsum board is covered. Can be added later. Want to block new room. Do not use the beam to support the heavy walls such as cement or masonry. Light walls should weigh no more than 50 kilograms per square meter.
ผนังเบาแผงกั้นห้องบังตากันแดด สิทธิบัตรเฉพาะของบริษัทแชนคอน Patent PP Grating and FRP Grilles Trellis SlatBlind Partition Splash/Weatherboard
ผนังเบาส่วนใหญ่ไม่เหมาะใช้กับ ห้องน้ำ, ห้องซักล้าง, ห้องแช่ไวน์ หรือห้องที่มีความชื้นสูง เนื่องจากผนังเบาไม่ค่อยทนน้ำและความชื้น อาจทำให้เกิดผนังบวมหรือเชื้อราได้ง่าย ยกเว้นผนังเบาแผงกั้นห้องของบริษัทแชนคอน ที่ทำจากวัสดุทนน้ำ ไม่แตกร้าว ป้องกันเสียง ทนแดด ไม่เป็นสนิม รวมถึงทนสารเคมีได้ดี ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ติดตั้งง่ายสะดวกในการซ่อมแซม สามารถวางในบริเวณใกล้ทะเล ลมจากทะเลไม่สามารถกัดกร่อนได้
Most luminaire is not suitable for bathrooms, washrooms, wine chambers or high humidity rooms. Because light walls rarely tolerate water and moisture. Can cause wall swelling or mold easily. Except for the wall of the Shannon condominium. Made of water-resistant material, no rancidity, sound proof, resistant to sun, rust and chemical resistance. Safe for health and the environment. Easy to install, easy to repair. Can be placed near the sea. Wind from the sea can not be eroded.
แนวทางการเลือกใช้วัสดุสำหรับ หน้ากากตึก ฉากแผ่นฝ้าผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตาตะข่ายกันนก บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง (Patent Grilles สิทธิบัตรเฉพาะของแชนคอน)
Guidelines for the selection of materials for building mask, curtain wall, curtain wall Fence rail partition partition. The canopy of the bird net. Hinged Wall Clamp (Patent Grilles Patented Patent)
คุณภาพวัสดุ ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการเลือกกันสาด แผงฝาผนังกั้น รั้วราวกันตก โดยวัสดุที่เลือกใช้นั้น จะมีผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิต(Life style)ของแต่ละบุคคล อาทิคุณสมบัติ ด้านการเก็บเสียง สีสันสดใสสวยงาม รูปลักษณ์ช่องตะแกรง ความทึบ/การโปร่งแสง ตัวอย่างเช่น การเลือกวัสดุของกันสาดแบบทึบโดยใช้เมทัลชีท (Metal Sheet), กันสาดหลังคากระเบื้องลอนคู่(Asbestos Sheet), กันสาดแผ่นโพลีคาร์บอเนต(Polycarbonate) ข้อเสียคือ ไม่สามารถมองผ่านได้ มีเสียงดังเมื่อฝนตกกระทบ อากาศไม่ถ่ายเท ร้อนอบอ้าวเนื่องจากปิดทึบหมด แต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้ฝ้าผนังกันสาดตะแกรงแบบโปร่งที่ทำหน้าที่ทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนจากแสงแดด และรังสีความร้อนใต้หลังคา ทำให้ลมหมุนเวียนได้ อุณหภูมิขณะใช้งานเย็นสบายไม่อบอ้าว มีคุณสมบัติด้านการเก็บเสียงจากน้ำฝนที่ตกกระทบแผ่นหลังคากันสาดเบากว่า และไม่มีเสียงจากตัววัสดุที่ขยายตัวเมื่อมีความร้อน
Material quality is considered one of the key elements of awning selection. Wall railing fence railing fall by the material used. Will affect the lifestyle (Life style). Features Soundproofing Beautiful colors. Grid view Opacity / Transparency For example, the choice ofasolid awning material usingametal sheet, an asbestos sheet roof, an awning,apolycarbonate sheet. have Noisy when rain hits Air The heat is off. But if you switch to the wall, awning, air curtains, which acts asaheat insulation from the sun. And thermal radiation under the roof. Windy Cold working temperature Features of sound from the rain falls on the roof sheet lighter. And no sound from the material that expands when it is hot.
ความรู้เกี่ยวกับวัสดุสังเคราะห์ที่นิยมนำมาใช้ทำ หน้ากากตึก ฉากแผ่นฝ้าผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น
Knowledge of synthetic materials used to make the mask, curtain wall, curtain wall. Fence rail partition partition.
ไฟเบอร์ซีเมนต์ คือวัสดุที่มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ,ทรายละเอียด ,น้า และเซลลูโลส ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์มักจะใช้ในการตกแต่งเป็น รั้วระแนง ,ระแนงกันสาด ,ฝ้าระแนง และระแนงกันแดด
พลาสวูด หรือ wood plastic composite วัตถุดิบหลัก คือ พลาสติก HDPE, LDPE, PVC, PP, ABS, PS, และPLA และเยื่อไม้ ระแนงพลาสวูดมักจะใช้ในการตกแต่งทำเป็นฉากระแนง ฝ้าหรือตกแต่งผนังบ้าน
ไวนิล คือ พลาสติกพิเศษชนิดหนึ่ง โดยมีส่วนผสมของ uPVC (unplastizide Poly Vinyl Choride) และสารเพิ่มประสิทธิภาพหลายชนิด อาทิเช่น สารเพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศ (Complex Stabilizer), สารเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทก (Impact Modifer), สารเพิ่มความทนทานต่อแสงแดด หรือ รังสี (UV Stabilizer)
ไม้อัด ส่วนใหญ่นิยมนำผนังเบาไม้อัดมาใช้เป็นผนังภายในบ้านมากกว่า เนื่องจากไม่สามารถทนแดดทนฝนได้ดีเท่ากับผนังหนักหรือไม้จริง ทั้งนี้ส่วนใหญ่นิยมใช้ไม้อัดสัก ไม้อัดซีเมนต์ และไม้อัดยาง มาทำเป็นผนังเบามากที่สุด โดยผสมชิ้นส่วนของไม้เข้ากับน้ำยาเคมีและนำมาอัดด้วยแรงดันสูง มักป้องกันปลวกได้ดี แต่อาจเป็นรอยขีดข่วนง่าย
ยิปซัมบอร์ด คือแร่ยิปซัมที่ผ่านกระบวนการเผาและนำไปอัดเป็นแผ่น และใช้กระดาษเหนียวประกบปิดไว้ทั้ง2ด้าน มีขนาดเท่ากับแผ่นไม้อัดและมีหลากหลายชนิดให้เลือกใช้งาน เช่น แผ่นยิปซัมธรรมดา ที่ใช้เป็นผนังในอาคารทั่วไป, แผ่นยิปซัมทนไฟ สามารถทนความร้อนได้ 1-3 ชั่วโมง มักใช้กับห้องครัว ทางหนีไฟ หรือบ้านที่กังวลเรื่องไฟไหม้, ยิปซัมสะท้อนความร้อน จะมีอะลูมิเนียมฟอยล์บุอบู่ด้านหลัง เหมาะสำหรับผนังที่โดนแดดจัด หรือต้องการประหยัดไฟ
กระเบื้องแผ่นเรียบ ผนังเบาจากกระเบื้องแผ่นเรียบ นิยมใช้ทั้งภายในและนอกตัวบ้าน เนื่องจากสามารถทนแดดทนฝนได้ดี แต่ไม่ทนต่อแรงกระแทก โดยกระเบื้องแผ่นเรียบจะมีลักษณะคล้ายไม้อัด และมีราคาย่อมเยา
เซลโลกรีต ผนังเซลโลกรีต (Cellocrete Sheet) มีลักษณะคล้ายกับผนังยิปซัม ผลิตจากเส้นใยไม้เนื้ออ่อนผสมกับปูนซีเมนต์ แล้วนำมาอัดเป็นแผ่น ผิวหน้ามีลวดลายสวยงามตามธรรมชาติ ปลวกไม่กิน ทั้งยังป้องกันความร้อนและเก็บเสียงได้ดี สามารถเลื่อย ตอกตะปู หรือใช้เครื่องมือเหมือนไม้ทั่วไปได้ สามารถเป็นได้ทั้งผนังนอกบ้านและในบ้านข้อดีของผนังเบาแผงบังตากันแดด หน้ากากตึก ฉากแผ่นฝ้าผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น คือมีความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง สามารถรื้อถอนหรือซ่อมแซมได้ง่าย อีกทั้งจุดเด่นสำคัญคือสามารถใช้ต่อเติมบ้านได้โดยไม่ต้องมีคาน หรือก่ออิฐใหม่ให้ยุ่งยาก เพราะผนังเบาสามารถสร้างขึ้นบน พื้นได้เลย เหมาะสำหรับบ้านที่มีข้อจำกัดในการทุบผนังหรือก่อผนังใหม่เพื่อต่อเติมห้อง หรือคอนโดมิเนียมที่อาจต่อเติมเปลี่ยนแปลงได้ยาก นอกจากนี้วัสดุที่ใช้ ยังมีคุณสมบัติพิเศษให้เลือกหลากหลายด้วย
Fiber cement isamaterial that contains Portland cement, fine sand, water, and cellulose. Fiber cement slats are often used as decorative fences, slats, awnings, battens and railing.
Plastic, HDPE, LDPE, PVC, PP, ABS, PS, and PLA plastic and plastic laths are often used as decorative laths. Ceiling or wall decoration
Vinyl isaspecial plastic. UPVC (Unplastizide Poly Vinyl Choride) and various enhancers such as Complex Stabilizer, Impact Modifier, Radiation (UV Stabilizer)
Most plywood is used asawall of light in the house. Because it can not withstand rain, it is as good as heavy walls or wood. Most commonly used tattoo plywood. Cement plywood and rubber plywood made to the lightest wall. Mix wood pieces with chemicals and pressurize them. Termite protection is good. However, it may beascratch.
Gypsum board isagypsum that is burned and burned toaplate. The two sides are the same size as the veneer and haveavariety of options such as plain gypsum board. Used asageneral building wall, gypsum board fireproof. It can withstand 1-3 hours of heat, often withakitchen,afire escape orahouse that is concerned about fire, gypsum, heat reflection. The aluminum foil on the back. Suitable for sunlit walls. Or want to save power
Flat wall tiles from flat tiles. Used both inside and outside the house. Because it can withstand the sun and rain. It is not resistant to shocks. The tiles are like plywood. And affordable.
Cellocrete Sheet is similar to gypsum wall. Made from soft wood fibers mixed with cement. Then compressed. The surface is beautifully designed by nature. Termites do not eat, they also protect the heat and sound well, can be sawn nails, or useatool likeacommon wood. Can be both outside walls and in the home. Advantages of light walls, sun visors, building mask, curtain wall, curtain wall. Fence rail partition partition is easy to install. Can be dismantled or repaired easily. The main advantage is that it can be used to fill the house without beams. Oranew brick. Because lightweight walls can be built on the ground, it is ideal for homes with limited walls or new walls to fill the room. Or condominiums that can be changed easily. In addition, materialsused. There are also many features to choose from.
วิธีการเลือก ตะแกรงฉีก สามารถจำแนกได้เป็น3รหัสสินค้า
ตะแกรงฉีกรหัส XG ,G มีลักษณะขนาดช่องตาเป็นรูปข้าวหลามตัด และลายข้าวเปลือก มีความหนาของวัตถุดิบเริ่มต้นที่4.5 –6มม. เหมาะกับลักษณะงานที่ต้องรับน้ำหนัก เช่น งานพื้นทางเดิน ในปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้ออกแบบ เลือกใช้เป็นวัสดุหลักๆ ขององค์ประกอบงานหน้ากากอาคาร เนื่องตัว XG จะมีความหนาและมีสันที่หนามาก ทำให้ตัววัสดุดูมีมิติ (ตัวอย่างงานหน้ากากอาคารตะแกรงฉีกรุ่น G1)
ตะแกรงฉีกรหัส XS มีลักษณะช่องตาเป็นรูปข้าวหลามตัด มีความหนาของวัตถุดิบเริ่มต้นที่1.2 – 4.5 มม. เหมาะกับลักษณะงานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักเป็นงานตกแต่ง เช่น งานผนัง งานฝ้า งานรั้ว ระเบียงกันตก ในปัจจุบันเห็นได้จากงานตกแต่งห้างสรรพสินค้า คอมมูตี้มอลล์ ร้านกาแฟ (ตัวอย่างงานระเบียงกันตก คอมมูตี้มอลล์ ตะแกรงฉีกรุ่น xs 61 )
ตะแกรงฉีกรหัส S มีลักษณะช่องตาเป็นลวดลาย มีความหนาของวัตถุดิบเริ่มที่ 2.3 –3มม.เป็นตะแกรงฉีกรุ่นที่มีลวดลายสวยงาม นิมยใช้ในงานตกแต่ง เช่น งานฝ้า งานตกแต่งร้านค้า คอฟฟี่ช้อป (ตัวอย่างราวกันตก ตะแกรงฉีกรุ่น S6)
** ตะแกรงเหล็กฉีก มี2ขนาด 4’x8’=1,220×2,440 มิลลิเมตร และ 5’10’=1,525×3,050 มิลลิเมตร ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก เหล็กยืด ตะแกรงยืด ตะแกรงกันนก ตะแกรงกันหนู ตะแกรงกันขโมย รั้วบ้าน ฝ้าเพดานอาคาร หน้ากากอาคาร เหล็กเจาะรู สแตนเลสฉีก อลูมิเนียมฉีก Expanded Metal
How to chooseatear grate can be classified into3code.
XG grille, G isadiamond shaped eyeshield. And rice paddies The thickness of the raw materials from 4.5 to6mm. Nowadays it is popular with designers. Used as the main material. Of the building components, the XG is thick and thick. Make the material look dimensional. For example,
XS Code: The thickness of the material is from 1.2 to 4.5 mm. It is suitable for the work that do not need to getadecorative work such as the wall work, fence, balcony fence today is seen from the decoration department store. Commodity Mall Coffee Shop Commodity Mall Shredder Model xs 61)
S-shaped grating pattern is patterned. Thickness of the material starts at 2.3 –3mm. I used to decorate, such as decoration, shop, coffee shop. Torn Shifter Model S6)
** Grid Grid with2sizes 4’x8 ‘= 1,220×2,440 mm and 5’10’ = 1,525×3,050 mm Grid Steel Tear Shear Steel Shear Steel Shear Strainer Grate Strainer Grate Building, Ceiling, Building, Mask, Building, Steel, Drill, Stainless, Torn, Aluminum, Shear, Expanded, MetalBuilding, Steel, Drill, Stainless, Torn, Aluminum, Shear, Expanded, Metal
#FacadeBuilding #FacadeDesign #CladdingMetal #CladdingWall #BuildingEnvelope #perforated facade #buildingenclosure #buildingskin #buildingfacade #buildingenvelop #Partition #Expanded #VentilatedCeiling #หน้ากากตึก #ปิดผิวอาคาร #หุ้มอาคาร #แผ่นฉลุลาย #ฉลุแผ่น #อลูมิเนียมคอมโพสิต #ฟาสาด #หน้ากากอาคาร #ปิดผิวอาคาร #หุ้มอาคาร #โลหะฉลุลาย #โลหะตกแต่งอาคาร #อลูมิเนียมคอมโพสิต #นวัตกรรมสถาปนิก #ออกแบบอาคาร #ครอบตกแต่งอาคาร #ตกแต่งอาคาร #รับเซาะร่องอลูมิเนียมคอมโพสิต #รับฉลุลาย #บันไดฉลุลาย #บันไดเหล็ก #ตกแต่งบันได #ราวบันไดฉลุลาย #ตกแต่งราวบันได #ตกแต่งราวกันตก #ประตูฉลุลาย #ประตูเหล็ก #ประตูสวน #ตกแต่งสวน #โลหะประดับสวน #partitionฉลุลาย #ตกแต่งฉากกั้นห้อง
#เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป, #ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง, #FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, #Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, #ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง, #Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Inlet Grating Curb, #ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล.ข้างฟุตบาท, #Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา, #Stair Tread Nosing Step Cover Protector #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น, #Tree Guard Safety Grating Frame #กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit, #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง, แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ
ตะแกรงระบายน้ำพลาสติกสำเร็จรูป เหล็กหล่อ อลูมิเนียม แสตนเลส ไฟเบอร์กล๊าส, ฝาบ่อเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป, FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, ตะแกรงน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำพุ Swimming Overflow Drain Grilles, ตะแกรงดักเศษอาหารขยะคันหินข้างฟุตบาท, #โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายกรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ, แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงไฟ/กรองลม/ระบายอากาศ
GFRP Composite Steel Gully Driveway Grating Grilles, Culvert Conduit Trench Drainage Ditch, Cast Ductile Iron Manhole Grid Covers Catch Basins, Safety Expanded Metal Grating, Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air flow Aluminium Grilles, Raised Access Floor Walkway Pavement, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon serrated bar Steel, Fastener Clip locked Clamps Saddle ตัวล็อคเหล็กยืดแผงตะแกรง, Formworks Tie Rod Wing Nut, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, , ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮล แฮนโฮล, ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสีย น้ำดี, ฝาปิดท่อทรงกลม สี่เหลี่ยมทึบไม่มีรู, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสียทิ้ง; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้
ทางเดิน แท่งรางตัวยู ระบายน้ำทิ้ง ริมขอบฟุตบาท, วายเมท, วายเมช, ไวร์เมช, พร้อมเฟรม, ช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีก พับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ด ไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปูถนนภายนอก, ตกแต่งบ่อปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, DIY ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบา ม่านโปร่งทึบแสง รั้วแผงพาร์ทิชั่นกั้นห้อง ฝ้าตกแต่งเอนกประสงค์ กันสาดบังตา ระแนงบานพับเฟี๋ยมซุ้มไม้เลื้อยรับลม, ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบ ดีไลท์,โพลีคาร์บอเนต ไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงาน ห้องน้ำ, ฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์ สายไฟ, กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอ ดีไซด์สวยหรูคู่อาคาร, Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat blinds/ Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Sun Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet, hospital, re-decoration works, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น หลังคากันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,Trench drainage driveway grates, Dust screen driveway grating near footbath, Leaf trapper safe drain traffic gratesผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกรองพื้น, PP PVC PE ABS Swimming Plastic Grating, ทดแทนแผงกั้นกระจกหน้ากากร้าน ตึก อาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดิน ไหล่ทางเท้า, พื้นบ้านและสวน สนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า, แผ่นตกแต่งแผงผนังด้านนอกบังตา, ฝ้าเพดาน ผนัง เชิงชาย ระเบียง หน้าจั่ว หน้าบันได กาแล ฉากกั้นห้อง บานเพี้ยม และแผ่นลายฉลุสำเร็จรูปหลายขนาด ลวดชุบพลาสติก ลายหลากหลายให้เลือก สามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุ ผนังลายฉลุ ใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ อลูมิเนียมคอมโพสิท, คอมโพสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อน สนิม ความร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี, ประหยัดพลังงาน ปลวกเห็ดราไม่ชอบ ไม่บวมน้ำ ปราศจากสารพิษ ไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษคืออะไร, Knack Siam SSG, American, USA, Asia Pacific, Fibergrate, Strongwell, Webforge, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่,โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว,ไบโอ, Bio, PU concrete, coating, stone hard, PEปรับปรุงพื้นโรงงานอาหาร, ครัว โรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, พื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทนเหล็ก, หิน, ไม้เทียมสังเคราะห์, wpc พลาสติค, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอเดรน, รูฟเดรน, พื้นกันสึก, กันกระแทก, รางน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบ,บานเกล็ด, แผ่นพื้นยางปูรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลท, ถาดรอง, ชั้นวาง, พื้นโรงเรือน, บล็อกตัวหนอน บล็อคปูถนน ตกแต่งพื้นสนามหญ้าสำเร็จรูป ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยGFRP Composite Diamond Top Manhole Covers Checker Plate surface (ฝาตะแกรงทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสกันลื่น) www.chancon.co.th GRATING SPECIALIST SOLUTIONS and HOW TO INSTALLATION: Outdoor Round Square Rectangle, Circle Circular, Fabricated Simple Culvert Gully, Tile Strip Cell Ceilings Gratings, Pass way Basement Sidewalk, plastic grid paving, Sealed Manhole, Hand hole Lifting Lifter, Catch Basins, Residential Trench Drainage Cell, Clean out, Driveway Floor Shower Drain Grates, Sewer, Recessed Cover, Pipes Clogged, Ductile Casting Grey Iron, replacement stainless steel, Hybrid Wood Lumber WPC fiber cement, Checkered Duck plate, Fittings, Sanitary, hatch box, remover, block masonry paving unit, dish drainer, Channel opener, Vessel, Ventilation Valves, Filter, Pool, pump, Ships, Replacing contaminated area, conductive, Corrosion resistance frame, Lattice, Rain Shooter Water, Trash rack Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, White Polystyrene Egg crate for air returns and venting. ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม EggCrate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Filter Media Diffusers Panel, DIY Abstract Plastic material board Pond Marine Aquarium, HVAC air vector acrylic return/Double deflection Grid Louver, terrarium vivarium ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี/ฟลูออเรสเซนต์ (Led/Fluorescent) แผงฉากแผ่นฝ้าเพดาน ผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคาร แผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้า ใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์ FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Root trunk bollards Tree pit road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden Big tree gratings, Tree Ring Protection Safety Guard Grating Paver Frame Cover Pedestrian, Road Street, molded, pultrusion, pultuded profiles, Covering welded bearing bar compound gratings, Cage Ladders, Staircase treads nosing, non anti slip skid stairways, broad step, tread covers, Handrail, Structural Shaped, Ideal for catwalks, double garage flooring, trench covers, ditch, Safety Expanded Metal Grating, Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air flow Aluminium Grilles, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon serrated bar Steel, spout clad, media support, air mesh, railing, multi grid, covered, concaved, gritted, minimesh, unsaturated polyester resin, Palette Partition Doors Windows, Operation platforms, Explosion proof floor, New idea Innovation design accessories, Components, architectural and industrial decking, Pedestrian Bridges System, courtyards dock threshold, fences, round tube, pipe sheets, angle, wire mesh, pit sump, coating, Polyurethane concrete, Polished, Epoxy self leveling , floor lining, carbon fiber, floor hardener, grouting, waterproof, wastewater treatment, Wet Cooling tower, columns, Laminate, Metallic, Aluminium Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, plastic, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, exotic PET, Flat sheets, translucent, Anti-UV stabilized, decorative solid sheets, gutter, ditch, made to order by professional fabricators, Hot Dipped Tinplates Electro forge Galvanized, brass Zinc, supply, Food Grade, weight per m2, spacing dimension, load table cutting, Dealer, Industry, Suppliers, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, specification price catalogue, for sales Infosoft
ຫນ້າກາກອອກຈາກອາຄານຊອງອາຄານ. ຊິ້ນສ່ວນກໍາແພງ | ສ່ວນປະກອບ
Shanon ຜະລິດແລະຂາຍ Facade Cladding Facade Cladding Masks. ຜະລິດຕະພັນ Perforated Perforated ໂລຫະຂະຫຍາຍຕົວ ພວກເຮົາ innovate ຈາກການຄິດແບບຖາປັດຕະຍະໃນໂລຫະແຜ່ນແລະການອອກແບບໃນພື້ນຜິວທີ່ລຽບເພື່ອສ້າງຄວາມຈິນຕະນາການຂອງຜູ້ໃຊ້. ມັນສະຫນັບສະຫນູນການຜະລິດຕັດ, folding, ສ້າງວັດຖຸຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: groove ສຸດອຸປະກອນການ. Aluminium Composite Steel, Aluminium, Steel Stainless Steel, Brass, Copper and others for wall coverings, facade building, panels, ceiling panels ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ ຕາຫນ່າງເຕົາ ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ດ້ວຍຄວາມເປັນມືອາຊີບແລະເຕັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດວຽກທຸກດ້ານກັບທຸກໆອາຄານ. ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ມີຊຸດທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ດີທີ່ຖືກຄິດໄລ່, ອ່ອນແອແລະເຫມາະສົມ. ຕົກແຕ່ງຫລາຍຮູບແບບຂອງອາຄານ.
ຄຸນນະສົມບັດຂອງການກໍ່ສ້າງຫນ້າກາກ Wall Curtain Ceiling ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ ຕາຫນ່າງເຕົາ Fa? Ade Cladding & FRP Specification Screen
1 Facade Mask ມີອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຈະເລືອກຈາກ. Fiberglass mesh ພາດສະຕິກ sunshade ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຈາກອະລູມິນຽມຜະສົມ, ສະແຕນເລດ, ທອງເຫລືອງ, ທອງແດງ
2 ຮູບແບບຂອງຕາຂ່າຍ: ປະເພດຕ່າງໆຂອງຮູ (ຮູ / ຮູ). ອະລູມິນຽມ Fiberglass ແມ່ນການອອກແບບຮຽບຮ້ອຍຄລາສສິກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮ່ອງສາມາດ
ປັບແຕ່ງໄດ້ ສໍາລັບເອກະສານຂອງເອກະສານ. 3. ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທັງນໍາໃຊ້ຄຸນນະພາບສູງ. ວັດສະດຸເຟີນີເຈີ, FRP ແລະອາລູມິນຽມທີ່ໃຊ້ໃນການບໍລິການບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອ, ອາກາດ, ດິນຟ້າອາກາດ, ດິນຟ້າອາກາດ, ອາກາດ, ດິນຟ້າອາກາດ
4. ຄວາມຫນາ: ຄວາມຫນາ: 1-13 ມມຫນັກແຫນ້ນ, ຫນາແຫນ້ນ, ບໍ່ແຂງແຮງ, ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ, ບໍ່ແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນກໍາແພງ, ເພດານແລະຜ້າອັດດັງ
. ຊ້າຍ ການນໍາໃຊ້ປະສົມປະສານຂອງສີໃນວຽກງານທີ່ປະສົມກັບຢາງແລະງາມເຂົ້າໄປໃນ ຫລືໃຊ້ການສີດໃສ່ແມ່ແບບໃນກໍລະນີທີ່ວັດສະດຸແມ່ນກໍາແພງຫີນ PP ຫຼື aluminium ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງແກ້ວ
6. ຂະຫນາດມາດຕະຖານສໍາລັບແຜ່ນຫນ້າກາກ. ຫມູ່ຄະນະກໍາແພງອາລູມິນຽມມີຂະຫນາດມາດຕະຖານທີ່ມີຂະຫນາດມາດຕະຖານທີ່ມີຂະຫນາດ 12x24m ແລະຫນ້າຈໍ FRP ກວມເອົາຂະຫນາດມາດຕະຖານເຖິງ 120x400cm. ພວກເຂົາສາມາດຕັດໄດ້ຕາມຂະຫນາດທີ່ຕ້ອງການ
. ການອອກແບບ, ເຊັ່ນ: ສີ (ສີທີ່ເຮັດໃຫ້ຄໍາສັ່ງ) ເພື່ອເລືອກເອົາຂະຫນາດຂອງຕາຫນ່າງ (Mesh ຂະຫນາດຕ່າງໆຕ່າງໆ)
ປະເພດແລະຂະຫນາດຂອງກໍາແພງ sunblind ອາຄານອອກດ້ານຫນ້າກາກຊອງການກໍ່ສ້າງ. ລະນຶກແບບປຸແຜ່ນໂລຫະ grooving | ຊຸ້ມ Cladding | Aluminum ຄີມກັນແດດ GRILL ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ.
1. ອາລູມິນຽມແຜ່ນ perforated ຮ່ອງຫນາ 1.5 ມມ. ເປີດ 20/40/60 mm. 1.2×2.4 ແມັດມາດຕະຖານແຜ່ນລະນຶກແບບປຸ Aluminum Compososite ຊຸ້ມຫນາ 15mm ລາຍ. Hole 20/40 / 60mm. ຂະຫນາດ 1.2×2.4M.
2 ແຜ່ນພາດສະຕິກອະລູມິນຽມ, ຮົ້ວຫນາ 15 ມົມ, ຮູ5ມົມ, ມາດຕະຖານ 12×14 ມົມ, ອະລູມິນຽມ Perforated, PegBoard ຂະຫນາດ 15 ມົມ, ຮູ 5mm, ຮູ 1.2x4mm.
3 FRP ມ່ານ grating ແດດລະບາຍຂຸມ 50x50mm ສູງ 13mm ເອກະສານມາດຕະຖານຂອງ 12 x4ແມັດ.. FRP Mold Grating 50x50x13mm ຂະຫນາດ |. ມາດຕະຖານ ຂະຫນາດ 1.2 x 4.0 ແມັດ.
4. Grating FRP ມ່ານແດດລະບາຍຂຸມ 38x38mm ສູງ 13mm ເອກະສານມາດຕະຖານຂອງ 12 x4ແມັດ.. FRP Mold Grating 38x38x13mm ຂະຫນາດ |. ມາດຕະຖານ ຂະຫນາດ 1.2 x 4.0 ແມັດ.
5. Grating FRP ມ່ານແດດລະບາຍຂຸມ 83x83mm 25mm ສູງມາດຕະຖານເອກະສານ 1 x4ແມັດ.. FRP Mold Grating ຂະຫນາດ 83x83x25mm |. ມາດຕະຖານ ຂະຫນາດ 1.0 x 4.0 ແມັດ.
ກະດານໄຂ່ກະຈົກໃສກະຈົກໃສກະຈົກໃສກະຈົກໃສຂະຫນາດ 60×120 ຊິ້ນ
Peforated Aluminum ວັດສະດຸສໍາລັບການໂລຫະຊຸ້ມ Cladding ການອອກແບບ ທີ່ເຫມາະສົມ Ideas ການອອກແບບວິທີການໄລ່ຮ່ອງຂອງອາລູມິນຽມເອກະສານ, ຜ້າອັດດັງເຫຼັກສໍາລັບຝາຕຶກອາຄານ. ການອອກແບບແຜ່ນກ່ອງສໍາລັບຫນ້າກາກຂອງການກໍ່ສ້າງ ແສງສະຫວ່າງການກັ່ນຕອງ Partition Partition ผู้ใช้งานควรจะต้องทำความเข้าใจและเตรียมข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้
1. Panel(WxL)/ขนาดของแผ่น :โดยมาตรฐานแผ่นมีขนาด 1.2 x 2.4 เมตร (2.88ตรม.)
2. Thick/High/ความหนาของแผ่นวัสดุ : ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຕັນຫນ້າກາກກັ່ນຕອງ baffle ແສງສະຫວ່າງ.ເລືອກຄວາມຫນາອຸປະກອນການຂອງ 1.5 ມມຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
3. Hole / ຕາຫນ່າງ / ການເປີດ: ການອອກແບບເປັນຂຸມທີ່ຂຸດຂຸມຮຽບຮ້ອຍ, ແຕ່ໃຫມ່ແລະອື່ນ ໆ ທີ່ເຫມາະສົມກັບສະຖາປັດຕະ. ມັນຄວນຈະເປັນຂະຫນາດນ້ອຍຫຼັບຂຸມທີ່ຂຸດ
4. Pitch / Center / ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໃຈກາງຂອງຂຸມໄດ້. ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຂຸມ ວັດແທກຕໍາແຫນ່ງໃນກາງຂຸມ. ເຖິງແມ່ນວ່າພື້ນທີ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເປີດຫຼາຍ (ບໍລິເວນເປີດ,%)
5. ການ Edge / Margin ຈະ / margin ຂອງການເປີດ: ການຈາກຂອບກັບຂອບ, ສີ່ຂຸມ
6. ປະລິນຍາ / ມຸມຂອງແຕ່ລະຂຸມ ທີ່ຫລາກຫລາຍ. Corner ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ມີຄວາມນິຍົມແມ່ນ 90, 60, 45 ອົງສາ
7. folding: ວິທີການເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຮູບທີ່ເລື່ອນລອຍ. ແລະສວຍງາມ
8 ສີ / ການເຄືອບ: ເລືອກສີ. ຫຼືຜິວຫນັງທີ່ເປົ່າສະແດງໃຫ້ເຫັນເນື້ອຜ້າວັດຖຸດິບ. ຕົວຢ່າງ, ດ້ານແມ່ນ gluminating ອາລູມິນຽມ.
FACADE ຫນ້າກາກຜ້າ, ເພດານ, ກໍາແພງຫີນ, ກໍາແພງຫີນ ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ ຕາຫນ່າງເຕົາ ຮັງໄຂ່ຮົ້ວບວມ:
ບໍລິສັດ Shanton ສ້າງຮູບແບບ. ອະລູມິນຽມຜະສົມ ແລະທຸກປະເພດຂອງໂລຫະ ປ່ຽນຫນ້າປົກຫນ້າດ້ານ FACADE ຂອງທ່ານໃນວຽກອອກແບບ. ສ້າງຫນ້າກາກຫນ້າດິນທີ່ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງທາງຫນ້າ. ຕົກແຕ່ງຜະຫນັງກໍາແພງຜະຫນັງຕົກແຕ່ງ ແຜງເວກເຕີກໍາແພງຫີນ Wall 3D ກໍາແພງກໍາແພງຫີນ 3D ກະດານກໍາແພງຫີນຕົກແຕ່ງກໍາແພງຫີນຕົກແຕ່ງດ້ວຍວັດສະດຸ MDF ສໍາລັບການຕົກແຕ່ງພາຍໃນເຟີນິເຈີຕົກແຕ່ງຕູ້ເຟີນິເຈີ floating ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຕົກແຕ່ງ ຮ້ານອາຫານແລະການຕົກແຕ່ງບ້ານ, ໂຮງແຮມ, ຄອນໂດແລະອະພາດເມນ, ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ຕາຫນ່າງ, ຮົ້ວ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂຸມຮອບ, ຖາດ, ຂຸມຍາວ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ຂີ້ເຫລໍກສະແຕນເລດເຫລໍກຮອບຂຸມຮອບຕາຂ່າຍເຮັດລາຍຕາຂ່າຍລູກໄມ້ PUNCHING STEINLESS STEINLESS STEEL STEEL SHEET ວຽກເຮັດງານທໍາເຮືອນແລະສວນ ການເຮັດວຽກທີ່ມີຮູ FACADE ຂຸມຮູຂຸມຮູຂຸມຮູຂຸມຂົນຮູປະຕູຮົ້ວຍາວຮູຂຸມຫລ່ຽມຮອບຫົກຫລ່ຽມແຜ່ນວັດຖຸດິບແປນແຜ່ນ ແຜ່ນສີດໍາ ແຜ່ນເຫຼັກ ແຜ່ນສັງກະສີ Punching pvc sheet ແຜ່ນເຫຼັກ punch ແຜ່ນສັງລວມ ແຜ່ນພາດສະຕິກ ເຈັດປ້ຽວ ຂຸມບັດສະຫມາດ ແຜ່ນໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະເຮັດຮູຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອຂຸມ້ໍາເຜີ້ງໃນວິທີຕ່າງໆ.
ເຄື່ອງປະດັບຍົນ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນລົດ, ແຕ່ງລົດໂລກຂອງເດັກນ້ອຍ, ເຄື່ອງສໍາອາງ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ
ການກໍ່ສ້າງ Facade Cladding Sun Screen ທຸກໆຄົນທີ່ຊອກຫາຕາຕະລາງເຫລໍກຂີ້ເຫຍື້ອອາດເບິ່ງຍາກແລະແຂງໃນຮູບຮ່າງ. ທ່ານຮູ້ວ່າທາດເຫຼັກແມ່ນຂີ້ຮ້າຍ, ມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ການກ້າວຫນ້ານີ້. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າທາດເຫຼັກແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ. ມັນສາມາດເຮັດໄດ້. ພຽງແຕ່ຈິນຕະນາການຈິນຕະນາການຍ້ອນວ່າມັນແມ່ນ …. ເອົາຜ້ານ້ໍາຕານຂີ້ເຫຍື້ອໄປໃສ່ຫນ້າກາກ. ແຜ່ນຮອງສາມາດໃສ່ພັບໄດ້ໃນເວລາເລື່ອນລົງ. ມັນຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຮົ່ມ. ກັບພາຍໃນຂອງອາຄານເຊັ່ນດຽວກັນ. ເມື່ອຢູ່ໃນອາຄານຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍຫຼາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກັບ grated ທາດເຫຼັກຮູບແບບຂອງທ່ານ. ຊ່ວຍໃຫ້ອາຄານຕ່າງໆເບິ່ງຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍຂື້ນ. ແລະຍັງໃຊ້ບ່ອນລະຄັງແດດອື່ນອີກ, ຂຸມເຈາະຫຼືແຜ່ນເຈາະຂີ້ເຫຍື້ອ. ຜົນຂອງແຜ່ນເຫລໍກທີ່ຈະເຈາະຮູຕາມຮູບແບບເສພາະເຊັ່ນຮູຂຸມສາມາດຂະຫນາດຫລຸມສີ່ຫລ່ຽມ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຂຸມ ແລະມຸມຂອງຂຸມເຈາະດັ່ງກ່າວ, ເຊັ່ນເຂົ້າຫຼືເຂົ້າທໍ່ຫຼືອຸປະກອນພາຍໃນທໍ່ເຢັນ. ການອອກແບບແມ່ນເຟີນີເຈີ. ພາບສະແດງຫລືແຜ່ນປ້າຍ, ຊັ້ນວາງ, ຊັ້ນວາງຫຼືລາງ. ຮົ້ວກໍາແພງ ເຫມາະສໍາລັບເຮືອນທີ່ທັນສະໄຫມ. ອະລູມິນຽມຜະສົມ ອຸປະກອນການຄລາສສິກບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານໄປ, ມີຫຼາຍດັ່ງນັ້ນກໍ່ແມ່ນແທ້. ນີ້ຈະເບິ່ງວິທີການຫຼາຍໆແຜ່ນທີ່ງ່າຍດາຍເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງຈົນຈົມຢູ່ແລ້ວໃນສາຍຕາຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສ້າງຕົວຕົນຈາກເອກະສານນີ້ແມ່ນຫນ້ອຍຫຼາຍ. ແຕ່ມີນະວັດກໍາທີ່ໄດ້ສ້າງອອກແບບຫລາຍຂຶ້ນ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສ້າງວຽກງານໃນທໍາມະຊາດ. # Declaration, # Punching, #, ຫຼືການສ້າງ 3D ມັນສາມາດຕອບສະຫນອງບັນຫາການອອກແບບຕ່າງໆ. Architect or designer ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍ ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກທີ່ຈະຄິດ. ບໍ່ມີຄວາມສັບສົນ … ບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້.
PP / FRP ແຜງກໍາແພງເພດານເປີດ
ກະດານເພດານ Chancon ແມ່ນເຮັດຈາກວັດສະດຸໃຍສັງເຄາະທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະ Poly Propylene plastics ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທົນທານແລະມີນ້ໍາຫນັກເບົາ. ໂດຍການປະສົມໃສ່ເມັດສີໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນຊິ້ນວຽກ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເຄືອບດ້ານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ງາມເຂົ້າໄປໃນແມ່ແບບ (Mold Grating) ລູກຄ້າສາມາດເລືອກສີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ເຫມາະສໍາລັບການຕົກແຕ່ງພາຍໃນຂອງອາຄານແຕ່ລະຄົນ. Available ທັງສອງຮຽບຮ້ອຍ ແລະມຸມສາກ ນອກເຫນືອໄປຈາກຂະຫນາດແລະສີ. ພວກເຮົາສະແຫວງຫາສະຖາປະນິກເພື່ອອະທິບາຍ. ເລືອກອອກແບບແລະດັດແປງເພື່ອສ້າງຄວາມຫລູຫລາໃນອາຄານ.
ອາຄານໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ CELL CELLING (ເພດານອາລູມິນຽມ) ເປັນເພດານ. ພາຍໃນອາຄານ, ນອກເຫນືອໄປຈາກການສ້າງຄວາມສະຫງ່າງາມທີ່ສວຍງາມຫຼັງຈາກນັ້ນ. ນີ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຍັງສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ອຍ່າງຮາບລື່ນ. ພາຍໃນອາຄານໃຫ້ຮູບແບບແລະຈັງຫວະຂອງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເຕົາອົບຍັງມີຄຸນສົມບັດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ເຫມາະກັບພື້ນທີ່ທັງຫມົດຢ່າງສົມບູນເພື່ອສ້າງ. ສວຍງາມ, ສະຫງ່າງາມ, ທັງຫມົດ views. ຮູ້ສຶກວ່າເຂັ້ມແຂງໃນທຸກຊ່ອງ. ເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງເປັນມິຕິ. ເພດານເພດານແມ່ນເຂັ້ມແຂງແລະທົນທານ. ຄຸນນະສົມບັດພິເສດແມ່ນງ່າຍດາຍຖອນການຕິດຕັ້ງ. ສາມາດຕົກແຕ່ງໄດ້ດ້ວຍສີທີ່ສົດໃສ, ບໍ່ມີລ້າງ, ບໍ່ມີຝຸ່ນ, ສະອາດແລະງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ. ໄປຫາຜົນກະທົບພິເສດອື່ນໆ. ເຫມາະສໍາຫລັບຫ້ອງພັກ, ສະລອຍນ້ໍາ, ສູນການຄ້າ, ສະແດງ, ສະຖານີລົດເມ, ຫ້ອງສະແດງ, ແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆ.
Sun Screen Shade Sunscreen | Weatherboard | ສີ Trellis Shade
ຕາບອດ, sunshades, blinds, rails, blinds, blinds, woods, blinds. ໂດຍບໍ່ມີການສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສຫນາເກີນໄປ. ການນໍາໃຊ້ປະເພດສະເພາະໃດຫນຶ່ງຂອງການປົກປ້ອງ sunscreen translucent. ມັນສ້າງບັນຍາກາດທີ່ສະບາຍແລະສະດວກສະບາຍສໍາລັບເຮືອນຫຼືຫ້ອງການຂອງທ່ານ. ມັນສາມາດຖືກແບ່ງອອກເປັນເຂດຫຼືການນໍາໃຊ້ແຍກຕ່າງຫາກ. ແລະການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຂົງເຂດດຽວກັນແມ່ນທົນທານ, ບໍ່ແມ່ນການກັດກ່ອນແລະບໍ່ແມ່ນແບບດ່ຽວ, ເຊັ່ນ: ວັດສະດຸທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫລໍກ, ແຜ່ນໂລຫະຫລືມຸງກະເບື້ອງ. ຮູ້ສຶກຄືກັບສີໃຫມ່ສະເຫມີ. ແລະມີຄຸນສົມບັດຂີ້ຝຸ່ນ. ຢ່າກັງວົນ ມັນເຮັດໃຫ້ມັນສະອາດງ່າຍ. ພຽງແຕ່ໃຊ້ສະບູທີ່ສະອາດດ້ວຍຜ້າສະອາດເພື່ອເຊັດ. sunscreen ຂອງທ່ານຈະມີຄວາມສົດຊື່ນຄືເກົ່າ. ບໍ່ວ່າມັນຈະຖືກຕັ້ງຢູ່ນອກເຮືອນ, ເຊັ່ນ: ບ່ອນຈອດລົດ, ເຮືອນຄົວຫຼືສວນຂອງເຮືອນຫຼືເຮືອນຂອງທ່ານແມ່ນຍັງສວຍງາມອີກດ້ວຍ.
“ຕຶກອາຄານ” ແມ່ນຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສົມບູນຂອງເຮືອນ, ນອກເຫນືອໄປຈາກການຕິດຕັ້ງເພື່ອປົກປ້ອງແສງຕາເວັນ, ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍຍັງເລືອກທີ່ຈະຕິດຕັ້ງມັນສໍາລັບຄວາມງາມເຊັ່ນດຽວກັນ. ປະຕູຮົ້ວຂອງມື້ນີ້ສາມາດໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກຮູບແບບຕ່າງໆແລະອຸປະກອນທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບບ້ານ. ເນື່ອງຈາກວ່າຜ້າໃບບັງແດດຈະໃຫ້ທ່ານປະໂຫຍດໃນການໃຊ້. ຮູບແບບຂອງທຽນຫີນແມ່ນເຫມາະສົມ. ກັບເຮືອນດີ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮືອນເບິ່ງສວຍງາມ. ເບິ່ງມັນຈາກໄກ. ປະຕູຮົ້ວໂລຫະຖືກອອກແບບໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອຈະປິດຢ່າງແຂງແຮງ. ຝາຜະຫນັງທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດພ້ອມກັບຝາປິດປິດທັງສອງດ້ານ, ການໄຫຼອອກອາກາດທີ່ສະດວກກວ່າ. ຫ້ອງຈະຮ້ອນ, ອຸນຫະພູມສູງ, ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃນການດໍາລົງຊີວິດ. New Canopy Design Roof ຖ້າທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ຕ້ອງແຫ້ງຫມົດ. ຄວນຈະໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສແຕ່ສາມາດປົກຄຸມແສງແດດໄດ້.
ຮູບຮ່າງຂອງມຸງຜ້າປູໂຕະນອກຈາກງາມ. ຮູບແບບຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັ້ງຄ່າອຸນຫະພູມໃນເຮືອນ. ນັ້ນແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອນເຢັນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບົບປະຕູເຮືອນແບບປະຈຸບັນແລະປະຕູແກ້ວເພື່ອເນັ້ນຫນັກໃສ່. Airiness ມຸມແຕ່ລະໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາບ່ອນມີແດດ. ແລະຝົນບໍ່ແມ່ນຄືກັນ ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເຈົ້າຂອງບ້ານຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການເລືອກຮູບແບບຜ້າໃບ. ຕັດສິນໃຈເຮັດຫຼືຕິດຕັ້ງ 1. ຕົບແຕ່ງຫນ້າໂຄ້ງໃບຫນ້າໂຄ້ງໃບຫນ້າບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ດ້ວຍໂລ້ມຸງຮ່ວມກັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າໂລ້ໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ curvature. ແຕ່ເພດານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງບໍລິສັດ. ສາມາດໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອເບິ່ງງາມແລະມີສີສັນທີ່ຈັບຕາ. ກຸນແຈສາມາດຖືກຕັດອອກເປັນໂຄ້ງ. ຕຶກເບັດນີ້ເຫມາະກັບ Modern Luxury2ບ້ານ. ແບບຕ່ອງໂສ້ແມ່ນໃຊ້ໃນແບບຂອງແບບຄລາສສິກແລະແບບປະສົມປະສານກັບມຸງກັບອີກຂ້າງຫນຶ່ງທີ່ສູງກວ່າເບື້ອງອື່ນໆ. ເພື່ອຈະສາມາດປົກປ້ອງແລະຝົນຝົນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການອອກແບບຈະໃຊ້ກອບເຫຼັກເພື່ອຮັບທຽນ. ຫຼືເພດານຢຸດ hanging ຈາກເພດານຂອງເຮືອນ.
ປະຕູຮົ້ວໂລຫະຖືກອອກແບບໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອຈະປິດຢ່າງແຂງແຮງ. ຝາຜະຫນັງທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດພ້ອມກັບຝາປິດປິດທັງສອງດ້ານ, ການໄຫຼອອກອາກາດທີ່ສະດວກກວ່າ. ຫ້ອງຈະຮ້ອນ, ອຸນຫະພູມສູງ, ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃນການດໍາລົງຊີວິດ. New Canopy Design Roof ຖ້າທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ຕ້ອງແຫ້ງຫມົດ. ໂທຫາແຂກທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວຕົນກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ພື້ນທີ່ຢູ່ອາຄານເພື່ອບອກເລື່ອງເລື່ອງທຸລະກິດທີ່ງ່າຍດາຍ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອພັດທະນາຫົວຂໍ້ອອກແບບ. ແລະການກໍ່ສ້າງຂອງທ່ານທີ່ມີຫນ້າດິນເປັນຂອງທ່ານ.
ຮົ້ວຮາງ bulkhead ການແບ່ງປັນ ຮົ້ວ FRP, ສີ Partition ຈໍທົ່ວໄປ.
ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ນໍາສະເຫນີເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເຮືອນຫຼືຫ້ອງການເທົ່ານັ້ນ. ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຮືອນຂອງທ່ານ. ແຕ່ຍັງພິຈາລະນາຄວາມງາມທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການເບິ່ງເຮືອນຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກດຽວກັນກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້. ດັ່ງນັ້ນມີຜະລິດຕະພັນຢູ່. curtain wall curtain ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ ຕາຫນ່າງເຕົາ ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ມີຫຼາຍຊະນິດ ແຕ່ລະຄົນແມ່ນສວຍງາມ. ການອອກແບບໃຫມ່ແມ່ນເປັນເອກະລັກ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນແລະຜູ້ກໍ່ສ້າງອິດສະຫຼະເຮັດວຽກຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ອອກແບບເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການຕົກແຕ່ງໃນສວນຫຼືເຮືອນເພື່ອເພີ່ມສີໃຫ້ແກ່ເຮືອນທີ່ທັນສະໄຫມ.
trellises Pergola, ການແບ່ງປັນອອກແບບ slatted ຜ້າມ່ານ, Mini Curtains ຮູ້ບຸນຄຸນອອກແບບ.
ມັນແມ່ນການເຮັດສວນອື່ນອີກ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້. ຫຼືຕິດຕັ້ງເປັນພາທິຊັນ. ຫຼືເຮັດໃຫ້ການຕົກແຕ່ງສວນ. ມັນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເປັນກໍາແພງທີ່ລອຍຢູ່ໃນການຈັດສັນພື້ນທີ່ໃນສວນເຊັ່ນກັນ. ຢ່າກັງວົນກ່ຽວກັບບັນຫາການກີດກັ້ນເຊັ່ນ: ໄມ້ແກະສະຫລັກໄມ້ເຊັ່ນກັນ. ມີຫຼາຍລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້. ທ່ານສາມາດໃຊ້ປະໂຍດໄດ້. ຕາຂ່າຍພາດສະຕິກຫລືເສັ້ນໃຍສັງເຄາະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍທີ່ສຸດ. ງ່າຍຕໍ່ການສະອາດ ມີການປ່ຽນແປງຫລາຍຢ່າງ. ຮູບແບບແຕ່ລະຄົນມີຄວາມສະຫງ່າງາມ, ການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
Ivy curtain Shanton ຂອງ battens ໄມ້ ຜະລິດຈາກຄຸນນະພາບສູງ FRP vinyl. ວັດສະດຸທີ່ສາມາດທົນຕໍ່ສະພາບອາກາດໃນປະເທດໄທບໍ່ໄດ້ແຕກຫັກ, ບິດ, ບິດຫລືບິດສີ, ບໍ່ລາກ, ເຖິງແມ່ນມີແສງແດດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ເນື່ອງຈາກການປະສົມສີພິເສດໃສ່ອຸປະກອນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ຂະບວນການຜະລິດ ບໍ່ມີອາການໃຄ່ບວມຍ້ອນຝົນແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ຢ່າເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເວລາຫລືຄ່າບໍາລຸງຮັກສາຕະຫຼອດຊີວິດການບໍລິການ. ຄຸນນະພາບຂອງ FRP vinyl ແມ່ນດີຫຼາຍ. ການຕິດຕັ້ງແມ່ນທັນສະໄຫມ. ຜ່ານການປະດິດສ້າງແລະການພັດທະນາ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງງ່າຍແລະສະດວກກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນມັນກໍ່ເຮັດໄດ້ດີ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ screws ເພື່ອເບິ່ງ. ບໍ່ມີເວລາເກັບຮັກສາສີຫລືສີ.
ການໂຈມຕີຂອງ Shanton ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮວບຮວມ, ຮວບຮວມ, ບ່ອນແດດ, ສິ່ງກີດຂວາງພື້ນທີ່, ຫຼືຮົ້ວເທິງຝາ. ມັນກໍ່ສ້າງຫຼາຍກວ່າ 100 ຮູບແບບສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການທຸກໆຢ່າງ. ທັນສະໄຫມ, ປະຈຸບັນ, ປະຈຸບັນ, ຫຼືທໍາມະຊາດ.
ການຕໍ່ສູ້ດ້ວຍໄມ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນແສງຕາເວັນ, ຝົນ, ລະບາຍອາກາດແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຢູ່ເຮືອນ. ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າໃນຫຼາຍໆຄັ້ງເຄືອຂ່າຍໄມ້ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງເຮືອນ. ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮືອນເບິ່ງສວຍງາມ. ຫນ້າສົນໃຈ ໂດຍສະເພາະເຮືອນໃນແບບປະຈຸບັນແລະແບບທັນສະໄຫມແມ່ນມີຄວາມນິຍົມໃນປັດຈຸບັນ. ຮູບແບບເຮືອນທີ່ທັນສະໄຫມມັກຈະເປີດກວ້າງ. ເປີດກັບລົມແລະແສງສະຫວ່າງ ໃຫ້ພາຍໃນ, ພາຍນອກເຊື່ອມຕໍ່. ເຮັດໃຫ້ຊີວິດໃກ້ຊິດກັບທໍາມະຊາດທີ່ເປັນໄປໄດ້. ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, ການໃຊ້ສາຍໄຟແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນສ່ວນມຸງຂອງກະດານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນແຜງອອກແບບ. ລວມທັງເຟີນີເຈີສວນເຊັ່ນ: ຮົ້ວໄມ້, laths, slats ໄມ້, ຕຶກອາຄານໄມ້, ທັງຫມົດທີ່ຢູ່ນອກອາຄານ, ແລະສະພາບອາກາດຮ້ອນແລະຮ້ອນສໍາລັບໄລຍະເວລາດົນນານ. ໄມ້ທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນປະເຊີນຫນ້າກັບບັນຫາຂອງການຂັດ, curling, ໂງ່, ປອກເປືອກແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກິນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ມັນມີຄ່າບໍາລຸງຮັກສາຫຼາຍ. ແລະເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນປົກກະຕິ. ມັນເປັນອາການເຈັບປວດ. ສໍາລັບອາຍຸນີ້. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເວລາ
ຕາຕະລາງ Patent PP Grating ແລະ FRP Grills Patent Panels
ກໍາແພງຫີນແບ່ງປັນແສງສະຫວ່າງ. ເປັນທາງເລືອກທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປັບປຸງໂຮງແຮມເຮືອນ. The Wall Partitions ຝາສໍາເລັດທີ່ມີຄວາມທົນທານບໍ່ແພງຫີນທີ່ມີຊີມັງ. Wall ແມ່ນກໍາແພງທີ່ແຍກຫ້ອງຈາກຝາທີ່ມີຊີມັງໄດ້. ກໍາແພງໄດ້ຖືກເຮັດດ້ວຍວັດຖຸທີ່ມີສີມ້ານໂດຍຊື່. ໂຄງປະກອບການພາຍໃນແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ຫຼືອາລູມິນຽມ, ແລະເສັ້ນໄຍພືດອື່ນໆຫຼືຫີນກາວເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາ. ການເສີມສາມາດໄດ້ຮັບການເພີ່ມໃນພາຍຫລັງ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແບ່ງປັນໃຫມ່ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫນັບສະຫນູນ beams ກັບກໍາແພງຫີນເປັນການຍາກທີ່ຊີມັງຫຼື masonry. Wall ແລະບໍ່ຄວນຊັ່ງນໍ້າຫນັກຫຼາຍກ່ວາ 50 ກິໂລຕໍ່ແມັດມົນທົນ. ຫມູ່ຄະນະກໍາແພງຮົ່ມຫ້ອງດວງອາທິດ. ຊອຟແວສິດທິບັດຂອງບໍລິສັດ Lincoln Patent PP Grating ແລະ FRP GRILL Trellis SlatBlind Partition Splash / Weatherboard.
ສ່ວນກໍາແພງທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຫ້ອງນ້ໍາ, ຫ້ອງລ້າງ, ຫ້ອງເຫລົ້າຫຼືຫ້ອງຄວາມຮ້ອນສູງ. ເນື່ອງຈາກວ່າຝາໄຟບໍ່ຄ່ອຍທົນທານຕໍ່ນ້ໍາແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຝາຫຼືເຊື້ອເຫັດສະກັດກັ້ນໄດ້ງ່າຍ. ຍົກເວັ້ນສໍາລັບກະດານກໍາແພງຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ Chanel. ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸນ້ໍາ, ບໍ່ມີຮາກ, ຫຼັກຖານສະແດງ, ທົນທານຕໍ່ກັບແສງຕາເວັນ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ໂລຫະແລະສານເຄມີ. ປອດໄພສໍາລັບສຸຂະພາບແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ, ງ່າຍຕໍ່ການສ້ອມແປງ ສາມາດຖືກຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບທະເລ. ລົມຈາກທະເລບໍ່ສາມາດຖືກກັດກ່ອນ.
ກໍາແພງຫີນແບ່ງປັນແສງສະຫວ່າງ. ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປັບປຸງເຮືອນ. ເນື່ອງຈາກວ່າຫ້ອງກໍາແພງຫີນແສງສະຫວ່າງ. ມັນແມ່ນກໍາແພງທີ່ສໍາເລັດແລ້ວທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະທົນທານ. ຝາໄຟແມ່ນກໍາແພງທີ່ໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນຫ້ອງ, ບໍ່ເຫມືອນກັບກໍາແພງທີ່ມີຊີມັງ. ແຕ່ກໍາແພງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາແມ່ນເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາຕາມຊື່. ໂຄງປະກອບພາຍໃນແມ່ນເຮັດດ້ວຍອາລູມິນຽມຫຼືໄມ້ອື່ນໆແລະແຜ່ນໃຍຫຼືແຜ່ນ gypsum ແມ່ນກວມເອົາ. ສາມາດເພີ່ມພາຍໃນໄດ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການບລັອກຫ້ອງໃຫມ່. ແລະບໍ່ນໍາໃຊ້ຄວາມສະດວກສະບາຍເຊັ່ນກໍາແພງຫນັກເຊັ່ນ: ຊີມັງຫຼືຝາ. ແລະຝານ້ໍາຫນັກຄວນນ້ໍາຫນັກບໍ່ເກີນ 50 ກຼາມຕໍ່ຕາແມັດ.
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຄັດເລືອກວັດຖຸສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຫນ້າກາກ, ກໍາແພງຫີນ, ກໍາແພງຫີນ ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ ທຽນ Hinged Wall Cladding (Patent Grilles Patented Patent Grill)
ຄຸນະພາບຂອງວັດສະດຸຖືກພິຈາລະນາເປັນຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງການເລືອກທຽນ. ອ້ອມຮົ້ວໄວ້ເພື່ອກໍາແພງ Panel ປະມານໃນແຕ່ລະຫຼຸດລົງໂດຍອຸປະກອນການນໍາໃຊ້ used. ຈະມີຜົນຕໍ່ຊີວິດ (ຊີວິດ ແບບຂອງບຸກຄົນ ຄຸນນະສົມບັດ Soundproofing ສີງາມ ຮູບຮ່າງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ Opacity /aຕົວຢ່າງໂປ່ງໃສ, ການຄັດເລືອກວັດສະດຸຂອງ awnings, ເຕັມໄປດ້ວຍແຜ່ນໂລຫະ (ໂລຫະແຜ່ນ), ຜ້າໃບບັງແດດ, ກະເບື້ອງຫລັງຄາມຸງຫລັງຄາ (Asbestos Sheet), awning Polycarbonate (Polycarbonate) ຂໍ້ເສຍຄືບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເບິ່ງຜ່ານ. Can ສຽງຮົບກວນເມື່ອຝົນຕົກ ອາກາດບໍ່ໄຫຼ ຮ້ອນເນື່ອງຈາກວ່າແຂງປິດ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສະຫຼັບກັບ rack ກໍາແພງ, awning outline ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສນວນຈາກແສງຕາເວັນ. ແລະແສງຕາເວັນພາຍໃຕ້ມຸງ. Windy ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກເຢັນບໍ່ເຢັນ. ມີສຽງຝົນຕົກຫນັກຫຼຸດລົງສຸດມຸງໄດ້ awning ສີມ້ານໄດ້. ແລະບໍ່ມີສຽງຈາກອຸປະກອນທີ່ຂະຫຍາຍເວລາຮ້ອນ.
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອຸປະກອນການສັງເຄາະທົ່ວໄປນໍາໃຊ້ເພື່ອຫນ້າກາກຜະຫນັງອາຄານ curtain ໄດ້.ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ
ເສັ້ນໃຍຊີມັງ ອຸປະກອນການແມ່ນປະສົມຂອງ Portland ຊີມັງ, ດິນຊາຍ, ນ້ໍາແລະອອກ cellulose, ໄຟເບີຊີເມນມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ decorate ຮົ້ວ, trellises, trellises, awnings, ແນງເພດານແລະສົມບູນຂຶ້ນ Sun
Plast ໄມ້ຫຼືໄມ້ພລາສຕິກປະກອບ ອຸປະກອນການແມ່ນ HDPE ຢາງ. , LDPE, PVC, PP, ABSPLA ແລະເຍື່ອແລະ lath plaster Woods ມັກນໍາໃຊ້ເພື່ອ decorate scene ອອກເປັນ. ເພດານຕົກແຕ່ງຫຼືກໍາແພງ
vinyl ເປັນປະເພດພິເສດຂອງຖົງຢາງ. ການລວມກັນຂອງ uPVC (unplastizide Poly Vinyl Choride) ແລະທີ່ດີທີ່ສຸດປະສົມຂອງປະເພດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມເຕີມທົນທານຕໍ່ກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (Stabilizer Complex), ເປັນສານເສບຕິດເພີ່ມການຕໍ່ຕ້ານຜົນກະທົບ (ຜົນກະທົບການດັດແປງ), ແຖມທົນທານຕໍ່ກັບແສງຕາເວັນ. radiation (UV Stabilizer)
ຜະຫນັງ ໄມ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຫມາະສໍາລັບກໍາແພງໄມ້ເຄືອບແສງສະຫວ່າງທີ່ເປັນເຮືອນ. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ແສງແດດເຊັ່ນດຽວກັນກັບກໍາແພງຫນັກຫຼືໄມ້. ການສັກຢາຮຸກຮານທີ່ມັກຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຜະຫນັງໄມ້ຢາງພາລາແລະໄມ້ຢາງພາລາເຮັດໃຫ້ກໍາແພງຫີນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງທີ່ເປັນໄປໄດ້. ປົນຊິ້ນໄມ້ທີ່ມີສານເຄມີແລະກົດດັນໃຫ້ພວກເຂົາ. ການປົກປ້ອງຄວາມໃກ້ຊິດແມ່ນດີທີ່ສຸດ. ມັນອາດຈະເປັນຮອຍຂີດຂ່ວນທີ່ງ່າຍດາຍ
ກະດານຫີນກາວ ແມ່ນດິນຂາວ, ເຊິ່ງໄຟໄຫມ້ຜ່ານຂະບວນການແລະໄດ້ຮັບການ felted. ແລະກະດາດຫນຽວທັງສອງດ້ານຂອງຂະຫນາດຂອງໄມ້ບັນທັດແລະທາງເລືອກຕ່າງໆເຊັ່ນຄະນະກໍາມະການ gypsum ທໍາມະດາ. ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນກໍາແພງກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ, ທົນໄຟທີ່ສະຫວ່າງ gypsum. ມັນສາມາດທົນຄວາມຮ້ອນ 1-3 ຊົ່ວໂມງ, ມັກຈະມີເຮືອນຄົວ, escape fire, ຫຼືເຮືອນທີ່ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບໄຟ, gypsum, reflection ຄວາມຮ້ອນ. ມັນຈະມີໃບອະລູມິນຽມໃນດ້ານຫລັງ. ເຫມາະສົມສໍາລັບຝາບ່ອນມີແດດ. ຫຼືຕ້ອງການຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານ ກະເບື້ອງລຽບ
ກະເບື້ອງແພງອ່ອນ ໃຊ້ທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກເຮືອນ. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນສາມາດທົນທານຕໍ່ແດດແລະຝົນ. ແຕ່ບໍ່ແມ່ນອາການຊັອກ. ໂດຍໂລ້ລຽບຄ້າຍຄືໄມ້ອັດ. ແລະສາມາດໃຫ້ໄດ້
CELLOCRETE ກໍາແພງ CELLOCRETE (ເອກະສານ Cellocrete) ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບກໍາແພງຫີນກາວ.ຜະລິດຈາກເສັ້ນໃຍໄມ້ອ່ອນທີ່ປະສົມກັບຊີມັງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບີບອັດ. ພື້ນຜິວຖືກອອກແບບມາຢ່າງສວຍງາມ, ເຄິ່ງທໍາມະຊາດບໍ່ກິນ, ພວກມັນຍັງປົກປ້ອງຄວາມຮ້ອນແລະສຽງທີ່ດີ, ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເລັບມືຫຼືໃຊ້ເຄື່ອງມືເຊັ່ນໄມ້ທົ່ວໄປ. ສາມາດທັງກາງແຈ້ງແລະໃນລົ່ມ. ປະໂຫຍດຂອງກໍາແພງແສງສະຫວ່າງ, ຝາອັດປາກມົດອາກາດ, ຫນ້າກາກກໍ່ສ້າງ, ກໍາແພງມຸງ, ກໍາແພງຂີ້ເຫຍື້ອ ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ
ມັນງ່າຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ. ສາມາດ dismantled ຫຼື repaired ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນວ່າມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ເຮືອນໂດຍບໍ່ມີກໍາແພງ. ຫຼື brick ໃຫມ່ຈະ tricky. ເນື່ອງຈາກວ່າຝານ້ໍາຫນັກເບົາສາມາດກໍ່ສ້າງຢູ່ເທິງພື້ນເຮືອນ, ມັນເປັນທີ່ດີເລີດສໍາລັບເຮືອນທີ່ມີກໍາແພງຫຼືຝາທີ່ຈໍາກັດໃນການຕື່ມຫ້ອງ. ຫລືຄອນໂດມິນຽມທີ່ສາມາດປ່ຽນໄດ້ງ່າຍໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອຸປະກອນການນໍາໃຊ້. ນອກນັ້ນຍັງມີຄຸນສົມບັດພິເສດໃນຫຼາຍໆ
ວິທີການເພື່ອ rip grill ຂອງທ່ານສາມາດຈັດເປັນ3ລະຫັດ
ຄວາມກະຕັນຍູ tore code XG, G ເບິ່ງຂະຫນາດຕາຫນ່າງເພັດ. ແລະຝູງເຂົ້າ ຄວາມຫນາຂອງວັດຖຸດິບແມ່ນປະມານ 4.5 ຫາ6ມມ, ເຫມາະສົມສໍາລັບວຽກງານເຊັ່ນການເຮັດວຽກພື້ນ. ປະຈຸບັນມີນັກອອກແບບທີ່ມີຊື່ສຽງ. ຄັດເລືອກເປັນເອກະສານຕົ້ນຕໍ. ອົງປະກອບຂອງຫນ້າກາກການກໍ່ສ້າງ, XG ແມ່ນຫນາແລະຫນາຫຼາຍ. ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເບິ່ງຂະຫນາດ. (ຕົວຢ່າງຂອງການກໍ່ສ້າງຫນ້າກາກ G1)
XS code tear ປີ້ງ resembles ຕາຫນ່າງເພັດ. ສູນຊຸມຊົນ, ຮ້ານກາເຟ (ສໍາລັບຕົວຢ່າງລະບຽງຫຼຸດລົງ. ສູນ Community sieve ເປັນຈີກ xs ສະບັບພາສາ 61)
ປີ້ງຈີກລະຫັດ S ມີຮູບແບບຕາຫນ່າງ. ຄວາມຫນາຂອງວັດສະດຸຈາກ 2.3 -.3ມມຊອນແມ່ນ torn ຮູບແບບທີ່ມີຮູບແບບທີ່ສວຍງາມ. Nimrod ຂອງໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຕົກແຕ່ງເຊັ່ນຮ້ານອອກແບບຕິດເພດານ, ຮ້ານກາເຟ (ສໍາລັບຕົວຢ່າງ rails. sieve ເປັນຈີກສະບັບພາສາຂອງ S6)
** tear Steel ກັບສອງ 4’x8 ຂະຫນາດໃຫຍ່ ‘= 1,220×2,440 mm ແລະ 5’10’ = 1,525×3,050 mm tear ເຫຼັກຕາຫນ່າງປີ້ງ້ໍາຕາທາດເຫຼັກ tear ຍືດທາດເຫຼັກ grill ກະຕັນຍູ stretch ນົກຕາຫນ່າງກັນ. ຄວາມກະຕັນຍູເປັນຫມູ່ຄະນະອ້ອມຮົ້ວໄວ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ຜ້າອັດດັງກໍ່ສ້າງອາຄານສະແຕນ perforated ສະແຕນເລດ, ອະລູມິນຽມ tear tear ລົງຈີກ.
#FacadeBuilding #FacadeDesign #CladdingMetal #CladdingWall #BuildingEnvelope #perforated facade #buildingenclosure #buildingskin #buildingfacade #buildingenvelop #Partition #Expanded #VentilatedCeiling # # ກາກອາຄານອາຄານການຄຸ້ມຄອງຫຸ້ມສ້າງ # # # ແຜ່ນ stencil perforated ແຜ່ນ # Aluminum Composite. far splash Composite # # # ກາກອາຄານອາຄານການຄຸ້ມຄອງຫຸ້ມສ້າງ # # # ໂລຫະອອກແບບໂລຫະ perforated. # Aluminum Composite. # # ສະຖາປະນິກປະດິດສ້າງໃນການອອກແບບອາຄານກວມເອົາຕົບແຕ່ງ # # # ຖືກເຊາະຮ່ອງຕົກແຕ່ງອາລູມິນຽມຄອມໂພສິດຮູບແບບ ladder # # # ໄດ້ເຫຼັກ perforated ໄດ railing # # ຮູບແບບການຕົກແຕ່ງບັນໄດ. ຕົກແຕ່ງ railing # rails ຕົກແຕ່ງ # # # ຕູເຫຼັກ perforated ສວນປະຕູປະຕູ # # # ໂລຫະອອກແບບພືດປະດັບສວນ. ຮູບແບບ #partition # ບັນນາທິການ Partition
Gully Grating || ເສັ້ນໃຍສັງກະສີເຫລັກຢູ່ໃນສະລອຍນ້ໍາ. trap
embedded in rods ກ້ອນຫີນ 1. Polypropylene ຢາງ ຂີ້ເຫຍື້ອຂີ້ເຫຍື້ອ . ພາດສະຕິກພິເສດ PP2ເຫຼັກສະແຕນເລດ. ສໍາຫລັບ
ລະບາຍນ້ໍາ3FRP FiberGlass Mould Grating Fiberglass drainage grate ກ໊ອກ ນ້ໍາ
ໃນໂຮງວຽກ4ສະລອຍນ້ໍາ ABS Overflow Drainage Grill ສະລອຍນ້ໍາ PVC Overflow ເຕົາ5Drive HighWay Drain Grating (Leaf Trapper Side)
6. ການປົກປັກຮັກສາຕົ້ນໄມ້ຂອບ Gray Paver Frame Frame ກວມເນື້ອແຂນ. ທັງສອງ jigsaw ແລະສໍາເລັດ.
Cover Manhole | ກວມເອົາຫນອງປິດກວມເອົາທໍ່ນ້ໍາປະປາ. Cast iron
8. Fiberglass FRP Cover Manhole Cover Fiber Channel Fiberglass Resin Cover (Non-rust resistant high-strength steel)
8. Cover Ductile Iron Manhole Cover (Round / Square) ປິດ manholes ການປົກຫຸ້ມຂອງ, ທໍ່ຫນຽວແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກລະບົບການປິ່ນປົວນ້ໍາ
9 FRP ເພັດ Top cover (ຕັດພິເສດ ) ຫລວງທໍ່ດີກະຈົກຄອບເສັ້ນໃຍທີ່ຈະຕັດຂະຫນາດຂອງແມງວັນໄດ້.
ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ || ແຜ່ນເຈາະ, ແຈ, eyebrow, ຝາຄອບແຜ່ກະຈົກໄຟເບີກາດ ມືຈັບປະຕູຍຶດ
10 ໄຂ່ທຽນໄຂ່ຝາຄອບຫນ້າຈໍຝາຄອບກ່ອງຜ້າມ່ານ ການກັ່ນຕອງອາກາດ
ventilation 11. Ceiling Trellis Shade Grilles Curtain ເພດານ Wall Curtain Wall
ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ Awnings ມ່ານ slatted 12 PegBoard ສະແດງເຄື່ອງມື hooks Shelves plank ບອດ Winnipeg ກໍາແພງຫີນຂຸມຫ້ອຍເຄື່ອງມືຈັດເກັບຂໍ້ມູນ
14 hdg. ການກັ່ນຕອງຂີ້ເຫລໍກ clip lock clutch fastener clip clip ຈັບ grip ຈັບ grip
ເຕົາ ສະແຕນເລດ / ເຫຼັກສະແຕນເລດ 15. ລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຟອມ: TieRod / ThreadBar WingNut WaterStopper ເຫຼັກກ້າແຂງແຮງສູງ
# grating ເຫຼັກ grating ໃຍແກ້ວ, overflow sewer ຢາງຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີທີ່ສໍາເລັດ, manholes # ປົກຫຸ້ມຂອງ, ແມ່ພິມສໍາລັບການປົກຫຸ້ມຂອງທາດເຫຼັກ, sewer, # FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic ແຂງຮູ້ບຸນຄຸນ, # ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manhole. COVER, #Swimming Overflow ບາຍນ້ໍາ Gully ຮູ້ບຸນຄຸນ Gutter, #Saddle ຄລິບ clamp ລັອກຕົວລັອກ, # ຄລິບລັອກເລືອກຍຶດແຜ່ນ sieve, #Leaf ລ່າ Side Highway Scupper ບາຍນ້ໍາ Inlet Curb grating, # sieve ຈັ່ນຈັບ debris, ຂີ້ເຫຍື້ອຝັງໃນວິຖີຊີມັງ. # Sgg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel # Panel Stripes ແຕ່ຕູ້ປາ, #Stair Tread ດັງຂັ້ນຕອນປົກ Protector # ປົກດັງແລະມຸມດານການປົກຫຸ້ມຂອງ trim ladders ລື່ນ #Tree Guard ຄວາມປອດໄພ Grating ກອບ # -frame ປີ້ງປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking ການເກັບຮັກສາເຄື່ອງມື DIY Kit ,. # ແພງຄະນະກໍາມະເຫຼັກ perforated Billboard Winnipeg hung ເຄື່ອງມືການເກັບຮັກສາ, ພື້ນແຜ່ນແລະທາງຍ່າງ.
ບາຍນ້ໍາ grating ຢາງ prefabricated ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ, ອະລູມີນຽມ, ເຫລັກສະແຕນເລດ, ໃຍແກ້ວ, ກວມເອົາຂຸມ cast iron sewers ການປົກຫຸ້ມຂອງສໍາເລັດ, FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic ແຂງຮູ້ບຸນຄຸນ, ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manholes COVER, sieve overflow ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີໄດ້. ນ້ໍາຂັງ Overflow Drain Grilles, Trash Grill, ຖັງຂະຫຍະ, Sandstone, # ຜະລິດແລະຂາຍກອບຂອບທີ່ຢູ່ທົ່ວຕົ້ນໄມ້. ການປົກຫຸ້ມຂອງຊັ້ນ, louvers, blinds, grilles, grilles, ກອງແສງ / ອາກາດ / ventilators
GFRP Composite Steel Gully ຖະຫນົນລົດແລ່ນຕະແກງຍ່າງ, Culvert Conduit Trench ບາຍນ້ໍາ Ditch, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດຫນຽວ Iron Manhole Grid ປົກອ່າງຈັບ, ຄວາມປອດໄພຂະຫຍາຍໂລຫະ Grating, ຫນັກຍົກເວັ້ນພາສີ Grip ບາຍ Channel, ລະນຶກແບບປຸ Air ໄຫຼ Aluminum ຍ່າງຍົກ Access Floor ທາງຍ່າງທາງຕີນ, ເດີ່ນ Ramp Edging Pedestal. , Carbon ເປັນແສກແຂ້ວເລື່ອຍເຫຼັກບາ, Fastener Clip ລັອກ clamps Saddle ລັອກຂ້ອນຂ້າງຍາວເປັນຫມູ່ຄະນະເຫຼັກ, ປີ້ງ, formwork ຜູກຄັນ Wing ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ, ເດັກຫລວງ ductile ແມ່ພິມສໍາລັບທາດເຫຼັກ, ຊິນທໍ່ຝາເສັ້ນໃຍ, lid ອອກຜູ້ຊາຍ tank ຂຸມມື-Holstein ໄດ້. , ການປົກຫຸ້ມຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງການກັ່ນຕອງທໍ່ຂ້າເຊື້ອ, manholes, manhole ການປົກຫຸ້ມຂອງນ້ໍາ sewage, ຜ່ານ cap. No ຂຸມມຸມສາກທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຊີມັງ, ເຫຼັກສີມັງ reinforced lid, ກວມເອົາແລະການປິ່ນປົວນ້ໍາລະບົບການເກັບລວບລວມສິ່ງເສດເຫຼືອ; ການຮູ້ບຸນຄຸນ, Great Tasting, ເຫຼັກ grill lid ການເຂົ້າເຖິງຕົວ, ກອບປີ້ງປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ.
ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ rod ຍ້າຍ U ລະບາຍ ditch ຕາມຂອບຂອງ sidewalk ໄດ້, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງມາຕຣິກເບື້ອງ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ, ຕາຫນ່າງເຫຼັກ, ທີ່ມີເຟຣມ, vents, ນ້ໍາ, ສາຍເຫຼັກ, tearing, ພັບຂຸມ jig, ເຫຼັກຂ້ອນຂ້າງຍາວ, ເສັ້ນໄຍກາກບອນ, TROTTERS ໂຄງສ້າງ, ຕິດຕາມໄກ່ໄດ້. ການລະບາຍ, ຄວາມຜິດພາດພຽງຍ່າງ, ລາງລົດໄຟ, ສຸດທິ mini ທີ່ມີກິ່ນຫອມ, block paving, ພາຍນອກຫນອງ koi ຕົກແຕ່ງ, ຈັດສວນ, ກະເບື້ອງ, ພື້ນ, ຍົກລະດັບອຸປະກອນ, ການຕິດຕັ້ງ DIY ງ່າຍ. ຕົວເອງ, ໄຟລອຍ, ໄຟຟ້າ, tbb , ກະເບື້ອງເພດານກ່ຽວກັບກໍາແພງຫີນເປັນ, ກໍາແພງຫີນຂອງ curtains gauzy ແສງສະຫວ່າງ opaque ໄດ້. ຮົ້ວຫມວດຫມູ່ຄະນະກໍາແພງ ຜົນປະໂຫຍດຕົກແຕ່ງເພດານເຮືອນຍອດ hinge slat ມ່ານ Fiat cedar breeze pergola, ປ້ອງກັນສັດປີກ cover mesh, ງູ, ນົກຊະນິດ, ກະຮອກ baffles ໄລ່ອອກ, ປະກອບເປັນຫມູ່ຄະນະແບ່ງປັນ. Delight, polycarbonate, vinyl, block ຫ້ອງການ, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ອາກາດຫນາວສໍາເລັດໄປລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດ, ສາຍໄຟ, ຫ້ອງ divider, ສູງເກຣດ. ອອກແບບອາຄານທີ່ມີຄ່າຄວນ, ປີ້ງລະບາຍອາກາດໂຈະໂຄງສ້າງເພດານມ່ານ Splashboard / Weatherboard / Slat / Trellis ຮົ່ມ, Panels Awning Wall ,. ສີທົ່ວໄປຄີມກັນແດດ Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini ຕົກແຕ່ງ Grating Curtains, ການປົກຫຸ້ມຂອງປະຕິມາກໍາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ເປີດເພດານສັບມືຖືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ສະຖານທີ່ຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຊຸບເປີມາເກັດ, ໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່, ຫ້ອງນ້ໍາ, ໂຮງຫມໍ, ການເຮັດວຽກໃຫມ່, ການອອກແບບ, ໂລ້ເພດານ. ກໍາແພງຫີນ ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ tovas canopy roof ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivyກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂີ້ເຫຍື້ອຂັບລົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂັບລົດຫນ້າຈໍຝຸ່ນໃກ້ footbath, trapper ໃບໄມ້ຄວາມປອດໄພຂີ້ເຫຍື້ອການຈະລາຈອນໄຫຼ ໃບສະຫມັກຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ສັບພະສິນຄ້າ, ໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນທາງແລ່ນ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ໂຮງຫມໍ, ວຽກງານການຕົກແຕ່ງໃຫມ່, ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວtovas canopy roof ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂີ້ເຫຍື້ອຂັບລົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂັບລົດຫນ້າຈໍຝຸ່ນໃກ້ footbath, trapper ໃບໄມ້ຄວາມປອດໄພຂີ້ເຫຍື້ອການຈະລາຈອນໄຫຼ ໃບສະຫມັກຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ສັບພະສິນຄ້າ, ໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນທາງແລ່ນ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ໂຮງຫມໍ, ວຽກງານການຕົກແຕ່ງໃຫມ່, ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ tovas canopy roof ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂີ້ເຫຍື້ອຂັບລົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂັບລົດຫນ້າຈໍຝຸ່ນໃກ້ footbath, trapper ໃບໄມ້ຄວາມປອດໄພຂີ້ເຫຍື້ອການຈະລາຈອນໄຫຼ Wall Curtain Ceiling ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວtovas canopy roof ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດ ອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂີ້ເຫຍື້ອຂັບລົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂັບລົດຫນ້າຈໍຝຸ່ນໃກ້ footbath, trapper ໃບໄມ້ຄວາມປອດໄພຂີ້ເຫຍື້ອການຈະລາຈອນໄຫຼ Wall Curtain Ceiling ຮົ້ວ partition ພາທະນາຍຄວາມຮົ້ວ tovas canopy roof ຫາງແຂນທີ່ມີແຂນ, ຝາ ivy ກະແສກະແສນ້ໍາຂົ້ນແຍກແຍກເປືອກເສດທີ່ລອຍຕົວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຢູ່ຕີນຂອງຕີນ. ຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ອາຫານ, ໃບ, ເຈ້ຍ, ກ້ອນຫີນ, ກ່ອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເສັ້ນຂ້າງໃນ U ຮູບຮ່າງເທິງຖະຫນົນ, ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງເມືອງ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະເມືອງແລະການວາງແຜນປະເທດ ກະຊວງຖະຫນົນຫົນທາງຊົນນະບົດອົງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂີ້ເຫຍື້ອຂັບລົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂັບລົດຫນ້າຈໍຝຸ່ນໃກ້ footbath, trapper ໃບໄມ້ຄວາມປອດໄພຂີ້ເຫຍື້ອການຈະລາຈອນໄຫຼ
ຊ່ຽວຊານ primer ຢາງ, PP PVC PE ABS ລອຍນ້ໍາພາດສະຕິກ Grating, ຮ້ານຄ້າທົດແທນແກ້ວອຸປະສັກຜ້າອັດດັງ, ອາຄານ, ຝາ, cladding ພາຍນອກ, ພື້ນແຜ່ນ, walkways, pavement ຕີນ, ແລະສວນສາທາລະພະຍາດແລະອື່ນໆ. ສາຍທໍ່ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການອອກແບບທີ່ຈະເລືອກຈາກ. ສາມາດຕັດແລະຕົກແຕ່ງເປັນເຟີນິເຈີ, stencil, ກໍາແພງ, stencil, ອົງປະກອບອອກແບບ, ສວຍງາມແລະເປັນເອກະລັກ. ອະລູມິນຽມຄອມໂພສິດ, ອົງປະກອບ, F. RP, ທົນທານຕໍ່ກັບ rust, corrosion, ຄວາມຮ້ອນ, ໄຟ, ອາຊິດ, ສານເຄມີເປັນດ່າງ, saves ພະລັງງານ. ປວກເຫັດ, ບໍ່ມັກອາການບວມ, ປອດສານພິດທີ່ບໍ່ແມ່ນໄຟ retardant ຂອງ, ໃຍແກ້ວຫລືໃຍແກ້ວພິເສດແມ່ນ, ສາມາດພິເສດສະຫຍາມ SSG, ອາເມລິກາ, ອາເມລິກາ, ອາຊີປາຊີຟິກ, Fibergrate, Strongwell, Webforge, repairing ເຮືອນ, ຫນ້າ laminate. ອິພໍອົກຊີ, E. ງ່າຍ Pot, E c ງ່າຍ Pot, ພື້ນ epoxy. Polyurethane, PVC, ກາວ, Bio, Bio, PU ສີມັງ, ການເຄືອບ, ແກນ, PE ປັບປຸງຮ້ານອາຫານໂຮງງານຜະລິດຊັ້ນ, ເຮືອນຄົວໂຮງແຮມ, ້ໍາສ້າງເຄືອບ, ສານເຄມີ, ທົນທານຕໍ່, ສີ acrylic, ອຸດສາຫະກໍາພື້ນ. ຊ່ອມຮອຍແຕກຊຶມ, ເຄືອບ, ຊຶມ, ສຽງ, ສານເຄມີສະນຸກເກີ, ໃຍແກ້ວ gutter, ແຜ່ນໂລຫະມຸງ, ອຸປະກອນທາງເລືອກ, ເຫຼັກ, ຫີນ, ໄມ້, ປອມ, ສັງເຄາະ, ຢາງ WPC, ຊີວະ. ການລີໄຊເຄີນ, ອຸປະກອນ, ແຜ່ນ, ແຜ່ນ, ຊັ້ນ, ຖັງ, Overflow ສະນຸກເກີ, ແຜ່ນ, shutters, ຢາງແຜ່ນປູພື້ນປະມານແທ່ນບູຊາ, ເຄື່ອງຈັກ, ພາເລດ, ພາຖາດ, shelves, ຊັ້ນ, ອາຄານ, block ປູບລັອກ, ແມ່ພະຍາດພື້ນຫຍ້າສໍາເລັດຮູບໄດ້. ແກ້ໄຂ Feng shui photosynthesis ທຽມ, ຢາງ WPC, ຊີວະ, ເອົາມາໃຊ້ຄືນ, ອຸປະກອນ, ທໍ່ລະບາຍ Fla, ທໍ່ລະບາຍຫລັງຄາພັຍດ້ານ, ຜົນກະທົບ, overflow gutter ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີ, ແຜ່ນ, shutters, ຢາງແຜ່ນປູພື້ນເຮືອນ. ແພລະຕະຟອມເຄື່ອງຈັກ, ແຜ່ນ, ຖາດ, ຊັ້ນ, ຊັ້ນ, ບລັອກ, ບລັອກ, ພື້ນດິນ, ຕົກແຕ່ງ. ແກ້ໄຂ Feng shui photosynthesis ທຽມ, ຢາງ WPC, ຊີວະ, ເອົາມາໃຊ້ຄືນ, ອຸປະກອນ, ທໍ່ລະບາຍ Fla, ທໍ່ລະບາຍຫລັງຄາພັຍດ້ານ, ຜົນກະທົບ, overflow gutter ຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີ, ແຜ່ນ, shutters, ຢາງແຜ່ນປູພື້ນເຮືອນ. ແພລະຕະຟອມເຄື່ອງຈັກ, ແຜ່ນ, ຖາດ, ຊັ້ນ, ຊັ້ນ, ບລັອກ, ບລັອກ, ພື້ນດິນ, ຕົກແຕ່ງ. ແກ້ໄຂ Feng shui
ກອບການຕໍ່ຕ້ານ Corrosion, Lattice, Rainer Shooter ນ້ໍາ, Trash Rack ໄຂ່ crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, ສີຂາວ Polystyrene Crate ໄຂ່ສໍາລັບການກັບມາທາງອາກາດແລະ venting. ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງສະຖານີອະວະກາດ EggCrate Fluorescent Plasma Grille ໄຟລ້ຽວຫນ້າຈໍການແຜ່ກະຈາຍສື່ມວນຊົນແຜງວົງຈອນ, DIY ສະຫຼຸບຕາຕະລາງອຸປະກອນການສຕິກ Aquarium, HVAC air acrylic return / Double deflection Grid Louver, vivarium terrarium ສໍາລັບການສ້າງສະຖານທີ່ຄະນະກໍາມະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອປ້ອງກັນແສງສະຫວ່າງຈາກໂຄມໄຟ LED / ສະທ້ອນແສງເຊນ (Led / Fluorescent) ແຜ່ນປິດຝາຄອບແຜງຫນ້າຈໍ Louver ກວມເອົາການກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ. ກະດານແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ສະແດງຜົນອອກແບບ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນອາກາດເພດານອາລູມິນຽມ.ການນໍາໃຊ້ເປັນການຕົບແຕ່ງສໍາລັບປາງາມ. A ຫ້ອງກະດານໂຄງສ້າງ divider ກໍາແພງຫ້ອງ pit, ຕູ້ຄອນເທນເນີ, ສັດນ້ໍາ, ກຸ້ງ, ກົບ, ຊາລາແມນຜະລິດຕະພັນ FRP, GFRPS, Glass Fiber Reinforced Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass ຝາອັດປາກຂຸມ, ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ Composite, ້ໍາຢາງ vinyl ester, bollards ຮາກລໍາຕົ້ນເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຂຸມ. ຖະຫນົນຫົນທາງປະຕິມາກໍາຄວາມປອດໄພໃນການອອກແບບ, ທັດ Exterior Garden gratings ຕົ້ນໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ Ring ການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງກອງ Grating Paver ຕົວຖ່ວງແຮນຍ່າງຕາມຖະຫນົນຖະຫນົນ, molded, pultrusion, ໂປຣໄຟລ໌ pultuded, ກວມເອົາຮອຍເກິດ gratings ບາປະສົມ ,.
မျက်နှာဖုံးမျက်နှာပြင်ကိုချွတ်တည်ဆောက်ခြင်းအဆောက်အဦးလွှမ်းမိုး။ အလှဆင်သတ္တုပန်းကန်ဖောက်ထား grooving မျက်နှာစာဝတ် | အမှတ်တရခနျးကနျ့ | တံခါးကိုလျှော | WINDOWS တွေ | ဖောက်ထားမျက်နှာကျက် | ရာသီဥတုသံမဏိ | အရိပ်စင်္ကြံ | လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု။
channel အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးသည့်ကုမ္ပဏီ, အဆောက်အအုံမျက်နှာစာဝတ်မျက်နှာဖုံးမျက်နှာပြင်အဆောက်အဦးလွှမ်းမိုး။ ပစ္စည်း grooving ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအပေါက်တစ်ပေါက်တူးခြင်းရှိမရှိ, ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးဖွဲ့စည်း, ခေါက်ဟာဖယောင်းစက္ကူဖြတ်တောက်ခြင်း၏ထုတ်လုပ်မှုထောက်ပံ့ပေးသည်။ လူမီနီယမ်ပေါင်းစပ်, သံမဏိ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, ကြေးဝါ, ကြေးနီနှင့်အခြားစာရွက်ဖုံးလွှမ်းအဆောက်အဦပိတ်ပင်တားဆီးမှုမျက်နှာကျက်ကုလားကာမြို့ရိုးကိုပန်းကန်ကိုဖုံးလွှမ်း။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင် Slat လိုက်ကာ, awnings ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးကိုခေါက် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာနှင့်အတူထူးခြားတဲ့စည်းဝေးပွဲကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအားလုံးအဆောက်အဦးများနှင့်အတူချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ တွက်ချက်မှုတစ်ခုစီးရီးမှတဆင့်တစ်ဦးအကြမ်းခံတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူ, ပြီးတော့ကောင်းတစ်ဦးပေါ့ပါး jig ရ။ ပုံစံအမျိုးမျိုးတည်ဆောက်ခြင်းအလှဆင်အမှတ်အသားများ။
အဆိုပါကွက်နေရောင်အရိပ်၏အမျိုးအစားနှင့်အရွယ်အစားကို။ မျက်နှာဖုံးမျက်နှာပြင်ကိုချွတ်တည်ဆောက်ခြင်းအဆောက်အဦးလွှမ်းမိုး။ ဖောက်ထားစာရွက်သတ္တု grooving | မျက်နှာစာဝတ် | လူမီနီယမ် Sun ကမျက်နှာပြင်ကင်သတ်မှတ်ချက်။
အထူ 1.5 မီလီမီတာ grooving perforated 1. စာရွက်လူမီနီယံ။ င့် 20/40/60 မီလီမီတာ။ 1.2×2.4 မီတာစံစာရွက်များဖောက်ထားလူမီနီယမ် Compososite မျက်နှာစာထူ 1.5mm ။ Hole 20/40 / 60mm ။ အရွယ်အစား 1.2×2 ။4အမ်
2. အထူ 1.5 မီလီမီတာ grooving perforated Peck ဖိုရမ်စာရွက်လူမီနီယံ။ င့်5မီလီမီတာ။ 1.2×2.4 မီတာစံစာရွက်များဖောက်ထားလူမီနီယမ် PegBoard ထူ 1.5mm ။ Hole5မီလီမီတာ။ အရွယ်အစား 1.2×2.4 အမ်
။ နေရောင်လိုက်ကာဆန်ခါ3FRP အပေါက် 50x50mm အမြင့် 13mm ရင်ဖွ 1.2 x ကို4၏စံစာရွက်မီတာ။
FRP မှိုခြစ်အရွယ်အစား 50x50x13mm | ။ စံ အရွယ်အစား 1.2 x ကို 4.0 မီတာ။
။ 4. ခြစ် FRP နေရောင်လိုက်ကာအပေါက် 38x38mm အမြင့် 13mm ရင်ဖွ 1.2 x ကို4၏စံစာရွက်မီတာ။
FRP မှိုခြစ်အရွယ်အစား 38x38x13mm | ။ စံ အရွယ်အစား 1.2 x ကို 4.0 မီတာ။
5. ခြစ် FRP နေရောင်လိုက်ကာအပေါက် 83x83mm ရင်ဖွအမြင့် 25mm နျ Standard စာရွက် 1 x ကို4မီတာ။ ။
အရွယ်အစား 83x83x25mm ဆန်ခါ FRP မှို | ။ စံ အရွယ်အစား 1.0 x ကို 4.0 မီတာ။
6. အဆိုပါဆန်ခါ 60×120 စင်တီမီတာအထူ 12.7 မီလီမီတာအဖွင့်အလင်းကိုသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား | ။ ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကို။
မျက်နှာစာဝတ်ဒီဇိုင်းအဘို့အ Peforated လူမီနီယမ်သတ္တုပစ္စည်း စံပြ ဒီဇိုင်းအကြံပြုချက်များစာရွက်လူမီနီယံ, အဆောက်အဦနံရံများကိုအဘို့အသံမဏိမျက်နှာဖုံး၏ဘယ်လိုလာကြတယ် groove ။ မျက်နှာဖုံးအဆောက်အဦး grooving စာရွက်လာကြတယ်ရည်ရွယ်သည်။ partition ကို filter ကိုနှောက်ခြောက်ခေါင်း။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအသုံးပြုသူများနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်သင့်တယ်: 1. Panel ကို (WxL) / စာရွက်အရွယ်အစား: 1.2 x ကို 2.4 မီတာ၏စံစာရွက်အရွယ်အစား (2.88 စတုရန်းမီတာ။ )2.: ထူထပ် / ပစ္စည်းတစ်ခုအမြင့် / အထူ။ : မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အလင်းကိုပျက်စေ filter များ၏ခွန်အား။ 1.5 မီလီမီတာသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတဲ့ပစ္စည်းအထူကိုရွေးချယ်ပါ။ 3. Hole / ကွက် / အဖွင့်: တစ်ပတ်လည်အပေါက်, စတုရန်းအပေါက်ပေမယ့်သစ်တစ်ခုနှင့်ဗိသုကာနှင့်ပိုမိုသဟဇာတဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသေးပတ်ပတ်လည်အပေါက် switch သည်ဖြစ်သင့်သည် တွင်း၏ဗဟိုအကြား 4. ဂေါက် / ရေးစင်တာ / အကွာအဝေး။
တွင်းအကြားအကွာအဝေး အလယ်ရှိအပေါက်ကိုတိုင်းတာအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ပိုပြီးအဖွင့် (အပွင့်လင်းဧရိယာ,%) အောင်တောင်မှလျော့နည်းအာကာသ
: 5. An Edge / Margin / အဖွင့်၏အနားသတ်ပါလိမ့်မယ် , အစွန်းကနေအစွန်းမှလေးခုတွင်းတိုင်း
တစ်ဦးချင်းစီအပေါက်6ဒီဂရီ / ထောင့်: ကျယ်ပြန့်။ ထောင့် သို့သော်လူကြိုက်အများဆုံး 90, 60, 45 ဒီဂရီရှိပါတယ်
: 7. ခေါက် / ခေါက်အစွန်း ဟာရေပေါ်အတိုင်းအတာစေတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထိုအခါလှပသော
8. အရောင် / အင်ျကြီ: အရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ကုန်ကြမ်း၏ရှင်းလင်းသောမျက်နှာပြင်ပြသပါ။ ထိုသို့သောလူမီနီယံအရေပြားကိုကြည့်တောက်ပတောက်ပြောင်အဖြစ်။
မျက်နှာစာဝတ်အဆောက်အဦးကုလားကာမြို့ရိုး, မျက်နှာကျက်အုပ်ကြွပ်ဖုံးလွှမ်း။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင် Slat လိုက်ကာ, awnings ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးကိုခေါက်။
ကုမ္ပဏီဆက်သွယ်ရန် Channel ကို Builder patterned စာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူမီနီယမ်ပေါင်းစပ်။ ထိုလူအပေါင်းတို့သတ္ထု အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းအဖုံးအရေပြားမျက်နှာဖုံးအဆောက်အဦးများတည်ဆောက်ခြင်းမျက်နှာစာဝတ် converting အစာရှောင်ခြင်းမျိုးစုံမျက်နှာဖုံး-ဝတ်အဆောက်အဦ BuildingFacade ထုတ်လုပ်သည်။ မြို့ရိုးကိုပုံစံမျိုး, မြို့ရိုးကိုပုံစံမျိုး Esaalai ကင်ပုံစံ။ အားလုံးအလှဆင်မြို့ရိုးအပြားနှင့်အတူ Wave ကိုဘုတ်အဖွဲ့ဟာဖယောင်းစက္ကူပုံစံမွို့ရိုးကို 3D မြို့ရိုးကိုအလှဆင် 3D Curve ဘုတ်အဖွဲ့ Esaalai ကင်ပုံစံ, အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ကက်ဘိနက်ပရိဘောဂများအတွက် MDF ပစ္စည်း။ အလှဆင်ဆိုင်များ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသောစားသောက်ဆိုင်နှင့်ဟိုတယ်ပရိဘောဂကွန်ဒိုနှင့်တိုက်ခန်းပေါ့ပါးကွက်ခြံစည်းရိုးအပေါက်ဆန်ခါဆန်ခါဆန်ခါယိုစီးပေါက်ကိုအရှည်။ နေမှုကိုချေဖျက်ကင်, သံမဏိစုပ်စက်အပေါက်ပတ်ပတ်လည်အပေါက်ကွက်ခြံစည်းရိုးကွက်ငှက်ပန်းကန်, ဖောင်းကြွ။ ပန်းကန်စလစ်ဖောက်ထားဖောက်ထား Metal စာရွက်သံမဏိရှုပ်နေခဲ့သည်။ အိမ်နှင့်ဥယျာဉ် မျက်နှာစာမာစတာတွင်းလည်ပတ်အလှဆင်ကင်မီးဖို, ရှည်လျားပေါက်တွေ, slot နှစ်ခု, slot ကအပေါက် Hole ပုံစံဇယားကွက်အပေါက်တောင့ဆေးတောင့်အပေါက်, ရှည်လျားသောအပေါက်အနား6ဘက်ရှိပုံစာရွက်ပစ္စည်းဝိုင်းပါတယ်။ စာရွက်သံမဏိပြားအနက်ရောင်အပေါက် ကြေးဝါကိုအပေါက် သွပ်ပန်းကန်တွင်း PVC စာရွက်လာကြတယ် Splat အပေါက် Composite အပေါက် ဖောက်ထားပလပ်စတစ်စာရွက် Gypsum အပေါက် စမတ်ဘုတ်အဖွဲ့ပန်းကန်အပေါက်။ စာရွက်သတ္တုပျားလပို့ပုံစံအပေါက်တစ်ပေါက်အပေါက်အပေါက် Holes ပျားရည်အထူး features တွေစေသည်။
လေဝင်လေထွက်ကင်မျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, Splashboard / Weatherboard / Slat လိုက်ကာ / Trellis အရိပ်, အမှတ်တရ Panel များနေကာ, အရောင်အသွေးစုံသောအထွေထွေမျက်နှာပြင် Partition ခွဲဆိုင်းငံ့, Anti-Bird ကိုထိန်းချုပ်ရေးခွငျထော, Mini ကိုအလှဆင်ခြစ်ကုလားကာ, ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်ဖွင့်လှစ်။အဆောက်အအုံမျက်နှာစာဝတ် Sun က Screen ကိုစီးပွားဖြစ်ရုံးအဆောက်အဦဖုံးလွှမ်း။ လူတိုင်းမျက်ရည်ဖွဲ့စည်းရန်ခိုင်မာသောနှင့်ခက်ခဲပုံပေါ်စေခြင်းငှါဆန်ခါသံမဏိကြည့်ရှုကြ၏။ သငျသညျယခုအများအပြားတိုးတက်ရေးပါတီရှိပါတယ်ဆန်ခါသံမဏိဆုတ်ကြောင်းသတိပေးနေကြသည်။ ဒါဟာဆန်ခါသံမဏိဆုတ်ကြောင်းမတွေးဝံ့စရာပါပဲ။ အဆိုပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုသိသိသာသာထိုးနှက်နိုင်ပါတယ် ကိုယ့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းစိတ်ကူး …. သံမဏိကွက်မျက်နှာဖုံးအဆောက်အဦးအောင်ဖို့မျက်ရည်ဆောင်ကြဉ်းရန်။ သင်တစ်ဦးသံမဏိဆန်ခါ rip အခါ pane ထဲကနေရောင်မီးတောက်ခေါက်။ ဒါဟာအစအရိပ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည် အဆိုပါအဆောက်အဦး၏အတွင်းပိုင်းအဖြစ်ကောင်းစွာ။ အဆောက်အဦးအတွင်း၌ပြီးတာနဲ့သူကပိုပြီးအဆင်ပြေစေပါသည်။ ထိုအခါသံမဏိဆန်ခါမျက်ရည်များ၏ပုံစံ။ သံမဏိအဆောက်အဦးများစုတ်လိုက်ကာ mask ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုအဆောက်အဦးကိုကြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးဇယားကွက်သို့မဟုတ်ဖောက်ထားစာရွက်သတ္တုလာကြတယ်အဖြစ်နေရောင်ကာကွယ်ဆေးသုံးပါ။ တစ်လှည့်လည်အပေါက်သကဲ့သို့ထူးခြားသောစာရွက်သတ္တုစိုင်းလာကြတယ်ပုံစံကနေဖန်ဆင်းတော်, စတုရန်းအပေါက်အပေါက်၏အရွယ်အစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ တွင်းအကြားအကွာအဝေး ထိုအခါဆန်ခါတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆန်ခါစိစစ်ဆန်စပါးကိုအဖြစ်စုပ်စက်တွင်းလိုင်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတွင်းပိုင်းအအေး, စာရွက်များသို့မဟုတ်ပိုက်သို့ဆန်နေသည်။ ပရိဘောဂဒီဇိုင်း ဒါမှမဟုတ် partition ကိုနံရံများဒါမှမဟုတ်ကင်ထိန်သိမ်းအင်္ကျီကိုခါးပတ်။ ခြံစည်းရိုးအုတ်ရိုးသည် စသည်တို့ကိုအသစ်တစ်ခုခေတ်မီနေအိမ်နှင့်အတူ လူမီနီယမ်ပေါင်းစပ်။ ပစ္စည်းမျှမကိစ္စငါတကယ်ယေဘုယျတွေအများကြီးဖြည့်ဆည်းရှိရာဂန္အရက်ဆိုင်။ ATI များစွာသောလူတို့မျက်စိတွင်ဤမြုံခေတ်သေပြီလွင်ပြင်မြင်ကွင်းအနည်းငယ်စာရွက်များသည်။ ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းများ၏ဖန်တီးမှုဝိသေသလက္ခဏာအလွန်သေးငယ်ဖြစ်ကြသည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပေမယ့်တစ်ဦးဖန်တီးမှုဒီဇိုင်းနှင့်အတူ ပို. ပင်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဆင်းကိုအလုပ်အကိုင်ဖန်တီးင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်။ # အဆိုပါပုံစံသည်လာကြတယ်ပေါက် #, #, ဒါမှမဟုတ် 3-D ကိုကို။ သငျသညျအမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ဗိသုကာသို့မဟုတ် site ကိုမိတ်ဖက်။ ပိုများသော ကျနော်တို့ဒါစဉ်းစားရန်လမ်းပြ Noonan ရဲ့ပျော်စရာ။ အခမဲ့ .. နယ်နိမိတ်မရှိရင် … နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမဖြစ်နိုင်ပါ။
မြို့ရိုးအပြားများနှင့်မျက်နှာကျက်ဇယားကွက် PP / FRP ပွင့်လင်းဆဲလ်မျက်နှာကျက်။
မြို့ရိုးအပြားများနှင့်မျက်နှာကျက်ဇယားကွက် Chancon ဖိုင်ဘာဖန်ကနေထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပလပ်စတစ် Poly Propylene အထူးအရည်အသွေး, ခိုင်မာတဲ့အကြမ်းခံခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းနမူနာသို့တိုက်ရိုက်အရောင်များကိုရောစပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်မှတဆင့်ဖွင့်မယ့်အပေါ်ယံပိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအခါ template ကို (မှိုခြစ်) တွင်လောင်းဖောက်သည်အရိပ်နဲ့အရောင်များ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကွာအဝေးရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဆောက်အဦး၏အတွင်းပိုင်းမှာမရရှိနိုင်ပါ။ ရရှိနိုင် နှစ်ဦးစလုံးရင်ပြင် နှင့်စတုဂံ အဆိုပါအရွယ်အစားနှင့်အရောင်အဆင်း ကျနော်တို့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းသူဗိသုကာပညာရှင်ကိုရှာဖွေဖြည့်ဆည်း။ အလှဆင် Choose နှင့်ဇိမ်ခံအဆောက်အဦကိုဖန်တီးရန်အဆင်ပြေအောင်။
အဆောက်အဦးများယေဘုယျအားဖြင့်မျက်နှာကျက်စကင်အဖုံးလူမီနီယံ (ဆဲလ် cell) ကိုအသုံးပြုပါ။ တစ်ဦး, ကြော့ခေတ်မီခြင်းနှင့် quaint ဖန်တီးတံ့သောအဆောက်အဦ။ ဒီအကင်အဖုံး ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုလည်းချောမွေ့စေနိုင်သည် စနစ်တကျညှိနှိုင်းနေသောလိုင်းများ၏ပုံစံနှင့်ရစ်သမ်အတွင်းပိုင်း။ ကင်အဖုံးကိုလည်းအရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်ပါ။ တစ်ဦးချောမွေ့စွာကိုဖန်တီးရန်ဒေသများအမျိုးမျိုးတို့ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။ ကြော့အားလုံးအမြင်များ တိုင်းရုပ်သံလိုင်းအတွက်ခွန်အားနှင့်ကြာရှည်ခံမှုခံစားရတယ်။ တစ်ဦးအတိုင်းအတာအဖြစ်အာကာသလုပ်ပါ။ မျက်နှာကြက်ကင်အလွန်အကြမ်းခံနှင့်ခိုင်ခံ့သောဖြစ်ပါတယ်။ အထူးအင်္ဂါရပ်ကိုအလွယ်တကူ disassembled ဖြစ်ပါတယ်။ တောက်ပတဲ့အရောင်ဖြင့်အလှဆင်နိုင်ပါသည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသော, ညစ်ပတ်မဟုတ်ဘူး။ သည်အခြားဆိုးကျိုးများမှ သည်အခြားနေရာများတွင်အပါအဝင်ရေကူးကန်, ကုန်တိုက်ကြီးတွေ, ရုပ်ရှင်ရုံ, ပြပွဲ, အရောင်းပြခန်းဘူတာရုံများအတွက်ခရီးသည်အခန်းက။
စမြတ်သောအရိပ် Sun ကမျက်နှာပြင် | Weatherboard | အရောင်အသွေးစုံသော Trellis အရိပ်။
Panel ကို, ရိပ် slat လိုက်ကာကွယ် awnings, trellises သစ်သားပလတ်စတစ်ဝင်းကသင့်အိမ်သို့ privacy ကိုထပ်ပြောသည်။ အစိုင်အခဲများလွန်းမိုးသည်းထန်စွာဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ။ စရိပ်များအသုံးပြုမှုတိကျတဲ့ပုံစံ။ သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်ရုံး၏နှစ်သိမ့်အဘို့သာယာသောလေထုဖန်တီးရန်။ သင်တစ်ဦးခွဲခြာဇုန်သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နှင့်အတူတူပင်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ချေးပြဿနာများအတွင်းကွဲပြားခြားနားသောဒေသများ၏တစ်ခုခင်းကျင်းပုံမှန်ထိုကဲ့သို့ပစ္စည်းသံမဏိစာရွက်သတ္တုမိုးမိုးအုပ်ကြွပ်ကျောက်ရုပ်ဖိုင်ဘာယေဘုယျထဲကလုပ်မမြင်နိုင်ကြဘူး။ အသစ်အရောင်စုံလည်စည်းနဲ့တူခံစားရ၏။ ကျွန်းနှင့်မျှမတို့မြေမှုန့်နှင့်အတူ။ embedded မဟုတ်ဖုန် ထိုသို့ပိုမိုလွယ်ကူရှင်းလင်းဖို့လုပ်။ စင်ကြယ်သောသုတ်ဖို့စင်ကြယ်သောအဝတ်နှင့်အတူအပျော့စားဆပ်ပြာနဲ့ရေသာအသုံးပြုပါ။ အရိပ်, သင်အသစ်များကိုအဖြစ်တောက်ပကြည့်ရှုမည်။
“မြတ်သော” ဟုအဆိုပါအဖြည့်များ၏အစိတ်အပိုင်းများထဲမှနေရောင်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ installed ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်, မိုးရွာရွာ, လူများစွာနေဆဲလည်းလှပသောတပ်ဆင်ရန်ရွေးပါ။ လက်ရှိမြတ်သောနေအိမ်များအမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်သောစတိုင်များ, ပုံစံမျိုးစုံနှင့်ပစ္စည်းများအနေဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုမှုများ၏ဒေသများရှိအကျိုးခံစားခွင့်များကိုနေကာအပြင်။ အဆိုပါနေကာ၏ပုံစံ အိမ်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကောင်းလှ၏ ဒါဟာအိမျတျောကိုလှပသောကြည့်ရှုစေသည် ငါကမဟုတ်ဘူး, အဝေးကကြည့်ရှု။ မြတ်သောအယေဘုယျအားဖြင့်တံဆိပ်ခတ်နေတဲ့အစိုင်အခဲများကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အစိုင်အခဲသည်မြို့ရိုးနှင့်အတူထိုအုတ်ရိုးဗေဒအားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ်အပိတ်နှင့်မျှမလေဝင်လေထွက်စေသည်ရင်တောင်။ အခန်းထဲမှာ sweltering အပူချိန်အသက်ရှင်ဖို့မသက်မသာခံစားမိပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အသစ်မြတ်သောဒီဇိုင်း သင်သည်ထိုဧရိယာခြောက်သွေ့တဲ့စိုးရိမ်ရန်မလိုပါလျှင်။ ဒါဟာပွင့်လင်းထုံးစံများကိုဒီဇိုင်း, ဒါပေမယ့်ရိပ်ရပါမည်။
အဆိုပါမြတ်သောအများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်များအပြင်လှပသောဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံများသည်လည်းအိမ်တော်၌အပူချိန်ဆုံးဖြတ်ရန်ရှိသည်။ အဲဒီအိမျတျောကိုအေးမြစေသည်အရာဖြစ်တယ်။ အိမ်သူအိမ်သားလက်ရှိတွင်အလေးပေးများအတွက်ပြတင်းပေါက်များနှင့်တံခါးမဖန်အတွက်မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။ airy မျက်စိ တစ်ခုချင်းစီကိုထောင့်နေရောင်ရှိပါတယ် ထိုအခါမိုးရွာရွာအတူတူမဟုတ်ပါဘူး အိမ်ပိုင်ရှင်မတိုင်မီမြတ်သော၏အခြားရွေးချယ်စရာပုံစံများကိုအာရုံစိုက်သင့်တယ်ဘယ်မှာကြောင်းပါပဲ။ တည်ဆောက်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် 1. Curve ခေါင်မိုးအုပ်ကြွပ်အထွေထွေနှင့်အတူမသုံးနိုငျနေကာမြတ်သောအတိတ်ကွေးသောဧရိယာမှပြီးပြည့်စုံသောစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်သင့်လျော်ရန်။ အဆိုပါအုပ်ကြွပ်ယေဘုယျအားဖြင့်ကွေးနှင့်သဟဇာတမဟုတ်လို့ပဲ။ မျက်နှာကျက် tile ကိုဇယားကွက်ကုမ္ပဏီ။ ချောမွေ့ပြောင်လက်နှင့်မျက်စိ-ဖမ်းအရောင်များကိုကြည့်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။ သော့ချက်တစ်ခုကွေးသို့ဖြတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာနေကာစတိုင်မော်ဒန်ဇိမ်ခံကား2သင့်လျော်သည်။ ဖြောင့်မြတ်သောအခြားဘက်ခြမ်းထက်အခြားဘက်အမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီတဲ့အိမ်ခေါင်မိုးနှင့်အတူဂန္ထဝင်နှင့်ခေတ်ပြိုင်-စတိုင်အိမ်ရှိအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာဖုံးအုပ်နှင့်ရေနုတ်မြောင်းနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသံမဏိစာရွက်မြတ်သောသုံးစွဲဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ခုသို့မဟုတ်မျက်နှာကျက်အိမ်တော်မျက်နှာကျက်ကနေဆွဲထား mount ။
မြတ်သောအယေဘုယျအားဖြင့်တံဆိပ်ခတ်နေတဲ့အစိုင်အခဲများကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အစိုင်အခဲသည်မြို့ရိုးနှင့်အတူထိုအုတ်ရိုးဗေဒအားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ်အပိတ်နှင့်မျှမလေဝင်လေထွက်စေသည်ရင်တောင်။ အခန်းထဲမှာ sweltering အပူချိန်အသက်ရှင်ဖို့မသက်မသာခံစားမိပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အသစ်မြတ်သောဒီဇိုင်း သင်သည်ထိုဧရိယာခြောက်သွေ့တဲ့စိုးရိမ်ရန်မလိုပါလျှင်။ ဒါဟာပွင့်လင်းထုံးစံများကိုဒီဇိုင်း, ဒါပေမယ့် shading ရပါမည်
လေဝင်လေထွက် PEFORATED မျက်နှာစာဝတ်2မီလီမီတာလူမီနီယံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်နေရောင်၏ထောင့်အောက်မှမီးလင်း acrylic တောက်ပြောင်ထဲမှာခြယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရိုးရှင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းအတို, ရိုးရှင်းသောစုံစုံတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်အာကာသ၏ဝိသေသလက္ခဏာဟုရှေ့တော်၌တောက်ပနှင့်အတူဧည့်သည်။ အလှဆင်တဲ့ပုံစံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ မျက်နှာစာနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပေါ်တွင်သင်၏တည်ဆောက်ခြင်း။
ခြံစည်းရိုးသံလမ်း bulkhead partition ကို
FRP ခြံစည်းရိုး, အရောင်အသွေးစုံသောအထွေထွေမျက်နှာပြင် Partition ခွဲ။
ကျနော်တို့အိမ်သို့မဟုတ်ရုံး၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများဝေယူအားပူဇော်မသာ။ အိမ်၏ဧရိယာမှဆက်ပြောသည် privacy ကိုသည်။ သို့သော်နေဆဲ, မသက်ဆိုင်ဗေဒ၏သင့်အိမ်၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်အဖြစ်ကောင်းစွာဤအရာတို့ကိုသတိထားမြှင့်တင်ရန်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်အပေါ် ကုလားကာမြို့ရိုးအပြား အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင် Slat လိုက်ကာ, awnings ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးကိုခေါက် ပိုများသောအမျိုးမျိုး တစ်ခုချင်းစီကိုမော်ဒယ်တစ်ဦးတော်တော်လေးတောက်ပရှိပါတယ် အသစ်နှင့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဒါဟာအစငျသညျကိုဖန်တီးရန်နေအိမ်ပိုင်ရှင်များနှင့်ဗိသုကာဖို့လွတ်လပ်မှုကိုပေးသည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အကျိုးစီးပွားနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ခေတ်မီစတိုင်အိမ်တော်ကိုအလှဆင်ရန်ကူညီရန်ဥယျာဉ်အလှဆင်သို့မဟုတ်အိမျတျောကိုလှည့်ပတ်ဖို့လည်းသုံးနိုင်တယ်။
Pergola trellises, အလှဆင် partitions ကို
လိုက်ကာ, Mini ကိုအလှဆင်ဆန်ခါကုလားကာ Slat ။
နောက်ထပ်အင်္ဂါရပ်သစ်ပင်တောင်တက်သမားအပေါ်ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုကြောင်းထိုဥယျာဉ်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် partition ကို install လုပ်ရန်။ သို့မဟုတ်ဥယျာဉ်တော်၌တခုအလှဆင်အဖြစ် ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာဥယျာဉ်တော်၌နေရာခွဲဝေချထားဘို့ဆွဲထားနံရံတစ်ခုအဖြစ်ကိုလည်းအသုံးပြုပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလွန်းယိုယွင်း, သစ်သားခုံအဖြစ်ပြဿနာများမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဤအထူးခြားပြောင်မြောက် features တွေနှင့်အတူ, သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည် ပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်ဖိုင်ဘာဖန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကိုအချို့အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ် ဤမျှလောက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် တစ်ခုချင်းစီကိုမော်ဒယ်တစ်ဦးကြော့ဒီဇိုင်းနှင့်ထူးခြားသောရှိပါတယ်။
Pergola trellises, အလှဆင် partitions ကို။ Shannon လေဆိပ်၏ Slat FRP အရည်အသွေးမြင့်မားဗီနိုင်းကနေထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရာသီဥတုကိုဆီးတားနိုင်မယ့်ပစ္စည်းကိုအဆုံးအဖြတ်ထိကပေါက်သို့မဟုတ်လိမ်မဖြစ်စေပါ, ဆေးသုတ်ကွာပင်နေရောင်မထိရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ အမဲသားကိုမှအရောင်တန်းပစ္စည်း။ ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုကတည်းက ရေနှင့်အစိုဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဘယ်သူမျှမရောင်ရမ်းခြင်းရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးသင့်ရဲ့အချိန်သို့မဟုတ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်မဖြုန်းတီးပါနဲ့။ အကောင်းတစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးဗီနိုင်း FRP အပြင်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဆွဲဆောင်မှု။ အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းခေတ်မီခဲ့သည် သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှတဆင့်တပ်ဆင်ပိုမိုလွယ်ကူနှင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေစေပါသည်။ အဆိုပါရာဇမတ်ကွက်တော်တော်လေးသပ်သပ်ရပ်ရပ်စိတ်ထဲအလုပ်လုပ်ကြသည်။ မြင်နိုင် screw နှစ်ခုမချန်မထားပါနဲ့။ အရောင်စုဆောင်းအချိန်ဖြုန်းသို့မဟုတ်ကျော်ခြယ်မထားပါနဲ့။
ရုပ်သံလိုင်းအကြောင်းအရာသစ်သားရာဇမတ်ကွက် slat လိုက်ကာမြို့ရိုးကိုနေကာ shaded ဧရိယာသို့မဟုတ်လေထုခြံစည်းရိုး slat မြို့ရိုးကို slat ဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအစတိုင်းလိုအပ်ထားရှိရန် 100 ကျော်စတိုင်များကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ သဘာဝသဘာဝနီးစပ်ခေတ်သစ်ချောမွေ့ပြောင်လက်ခေတ်သစ်ခေတ်ပြိုင်စတိုင်သို့မဟုတ်ခေတ်ပြိုင်စတိုင်။
အိမ်အတွင်း၌နေရောင်နှင့်တကွမိုဃ်းရွာ, လေဝင်လေထွက်နှင့် privacy မှ Slat များအပြင်။ ငါအများကြီးအခါသမယပေါ်တွင်သစ်သား battens လည်းအိမ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံရန်ရှိသည်။ အိမ်သူအိမ်သားလှပသောကြည့် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ယနေ့လူကြိုက်များကြောင်းအိမ်တော်ကိုခေတ်ပြိုင်နှင့်ခေတ်ပေါ်စတိုင်။ စတိုင်အိမ်ကယနေ့ဖွင့်လှစ်အာကာသကိုအာရုံစိုက်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ ပွင့်လင်းသောလေထုနဲ့အလင်း အဆိုပါပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပလင့်များ တတ်နိုင်သမျှသဘာဝနီးစပ်နထေိုငျသောသူတို့အဘို့။ သစ်သားဒီချွတ်ဗေဒရည်ရွယ်ချက်များအတွက် panel ကိုရိုးကိုဖို့ခေါင်မိုး panel က၏အစိတ်အပိုင်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အပြင်မှာတည်ရှိပြီးနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာပူပြင်းခြင်းနှင့်စိုစွတ်သောရာသီဥတုနှင့်ထိတွေ့ထားတဲ့ဥယျာဉ်ခြံစည်းရိုးကိုထင်း slat သစ်သားတဲ kiosk အတွက်ပရိဘောဂ။ ဒါကြောင့်ဆေးသုတ် buckling နှင့်ကွာ, သဘာဝသစ်သားပုပ်နှငျ့ရငျဆိုငျ, ခွတှစေားလည်းပိုပြီးစားကြလော့။ ဒါကြောင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ကုန်ကျမှုများကိုကာကွယ်။ ထိုအရပါမည်မှန်မှန် ဒါဟာနာကျင်ကိုက်ခဲနေသည် ဒီမျိုးဆက်အဘို့, အချိန်ရှိသည်ခဲ ..
ကျွန်ုပ်တို့၏မူပိုင်ခွင့်လင်ကွန်းမူပိုင်ခွင့် PP ခြစ်ခြင်းနှင့် FRP ကင်၏ partition သည်မြို့ရိုး panel ကအခန်းတစ်ခန်း Divide ဖန်သားပြင်။
မြို့ရိုးအပြား Partition ခွဲ နေအိမ်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်အရေးပါသောအခြားရွေးချယ်စရာ။ The Wall ခနျးကနျ့ နံရံဘိလပ်မြေနှင့်အတူတစ်ဦးအကြမ်းခံမဟုတျဘဲမြို့ရိုးအနှင့်အတူပြီးဆုံးနေကြသည်။ က Wall ဘိလပ်မြေနှင့်အတူမြို့ရိုးကနေအခန်းကိုခြားနားစေသောနံရံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ရိုးအနာမတော်ဖြင့်ပိုမိုပေါ့ပါးဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းသည်။ အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်ပုံကိုဖုံးလွှမ်းရန်သစ်သားသို့မဟုတ်လူမီနီယံနှင့်အခြားဖိုင်ဘာသို့မဟုတ် gypsum ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဖြည့်စွက်အကြာတွင်ဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။ အသစ်တစ်ခုကို partition ကိုအောင် နှင့်ဘိလပ်မြေသို့မဟုတ်ပန်းရံကဲ့သို့မာရိုးထောက်ခံမှုထုပ်လိုအပ်သည်။ နံရံနဲ့တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် 50 ကျော်ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်သင့်ပါဘူး။ မြို့ရိုးအပြားနေရောင်အခန်းထဲမှာအရိပ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏မူပိုင်ဆော့ဖ်ဝဲကိုလင်ကွန်းမူပိုင်ခွင့် PP ခြစ်ခြင်းနှင့် FRP ကင် Trellis SlatBlind Partition ခွဲ splash / Weatherboard ။
ရေချိုးခန်း, ရေချိုးခန်းအခန်းတစ်ခန်းတစ်စပျစ်ရည်ကိုအခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆနှင့်အတူအခန်းတခန်းများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးက Wall အလင်း။ မြို့ရိုးအရေယဉ်များနှင့်အစိုဓာတ်ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ မြို့ရိုးကိုအလွယ်တကူရောင်ရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်မှိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Shannon လေဆိပ်၏မြို့ရိုးအပြား partition ကို မှလွဲ. ။ ဆူညံသံ, နေရောင်ယဉ်, Non-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးနှင့်ဓါတုပစ္စည်းမှခံနိုင်ရည်နှိမ်နင်းခြင်းမရှိဘဲရေကိုခံနိုင်ရည်ပစ္စည်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ လုံခြုံမှု, ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် , ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လွယ်ကူတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသော။ ပင်လယ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အနီးတွင်ထားရှိနိုင်ပါသည် ပင်လယ်ကိုမဟုတျဘဲချေးကနေလေတိုက်။
မြို့ရိုးအပြား Partition ခွဲ နေအိမ်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်အရေးပါသောအခြားရွေးချယ်စရာ။ The Wall ခနျးကနျ့ နံရံဘိလပ်မြေနှင့်အတူတစ်ဦးအကြမ်းခံမဟုတျဘဲမြို့ရိုးအနှင့်အတူပြီးဆုံးနေကြသည်။ က Wall ဘိလပ်မြေနှင့်အတူမြို့ရိုးကနေအခန်းကိုခြားနားစေသောနံရံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ရိုးအနာမတော်ဖြင့်ပိုမိုပေါ့ပါးဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းသည်။ အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်ပုံကိုဖုံးလွှမ်းရန်သစ်သားသို့မဟုတ်လူမီနီယံနှင့်အခြားဖိုင်ဘာသို့မဟုတ် gypsum ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဖြည့်စွက်အကြာတွင်ဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။ အသစ်တစ်ခုကို partition ကိုအောင် နှင့်ဘိလပ်မြေသို့မဟုတ်ပန်းရံကဲ့သို့မာရိုးထောက်ခံမှုထုပ်လိုအပ်သည်။ နံရံနဲ့တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် 50 ကျော်ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်သင့်ပါဘူး။
အဆောက်အဦးများအတွက်ကုန်ကြမ်းများ၏ရွေးချယ်မှုကုလားကာမြို့ရိုးအပြားဖုံးလွှမ်း။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ Slat လိုက်ကာ, awnings ပိုက်ကွန်ကိုငှက်။ ပတ္တာ pergola အမှတ်တရ (မူပိုင်ခွင့်ကင် Shannon လေဆိပ်မူပိုင်ခွင့်) ခေါက်။
အရည်အသွေးသင့်ရဲ့နေကာတစ်ဦးသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းများအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကဆြုံးန်းကျင် Panel ကိုမြို့ရိုးကိုခြံစည်းရိုး။ ဘဝ (ဘဝ၏ပုံစံကိုထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးချင်းစီ၏စတိုင်) ထိုကဲ့သို့သောဂုဏ်သတ္တိများ အဆိုပါ soundproofing ရောင်စုံအလှ ကင်မကြည့်ပါ opacity / တစ်ပွင့်လင်းဥပမာစာရွက်သတ္တု (သတ္တုစာရွက်) နှင့်ပြည့်စုံ awnings ၏ပစ္စည်းကိုရှေးခယျြ, နေကာ, အိမ်ခေါင်မိုးအုပ်ကြွပ်ခေါင်မိုး (ကျောက်ဂွမ်းစာရွက်), Polycarbonate (Polycarbonate) ကျဘက်ကိုနေကာမှတဆင့်ကြည့်ရှုရန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှိ ဆူညံကြောင့် hit မိုးရွာသည့်အခါ air ကိုစီးဆင်းမှု ပူအိပ်ဇော drapes သငျသညျမွို့ရိုးကိုထိန်သိမ်းပြောင်းရန်လျှင်, နေရောင်ကနေလျှပ်ကာအဖြစ်ပြုမူကြောင်းအကြမ်းဖျင်းနေကာ။ ခေါင်မိုးအောက်မှာနှင့်တောက်ပသောအပူ လေတိုက်စောင်ရေ အိုက်မဟုတ်အဆင်ပြေ operating အပူချိန်။ မိုးရွာရွာ၏အသံပေါ့ပါးနေကာအမိုးပေါ်ပြုတ်ကျအတူ။ လာသောအခါအပူများနှင့်ပစ္စည်းများကနေအသံမတိုးချဲ့။
အများအားအဆောက်အဦးကုလားကာမြို့ရိုးအပြား mask ရန်အသုံးပြုသည့်ဓာတုပစ္စည်းများအသိပညာ။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။
ဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေ အဆိုပါပစ္စည်းကိုလက်ပံဘိလပ်မြေ, သဲ, ရေနှင့် cellulose ချွတ်တဲ့အရောအနှော, ဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေမကြာခဏခြံစည်းရိုး, trellises, trellises, awnings, မျက်နှာကျက် battens နှင့် batten Sun ကကိုအလှဆင်ဖို့အသုံးပြုသည်
Plast Wood ကသို့မဟုတ်သစ်သားပလပ်စတစ်ပေါင်းစပ် ပစ္စည်းပလပ်စတစ်စတင်ဖြစ်ပါတယ်။ , LDPE, PVC, PP, ကို ABSမကြာခဏချွတ်မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုအလှဆင်ဖို့အသုံးပြု PLA နှင့်ပျော့ဖတ်နှင့်တွင်ခုံအင်္ဂတေဝုဒ်။ အလှဆင်မျက်နှာကြက်သို့မဟုတ်မြို့ရိုးကို
ဗီနိုင်း ပလပ်စတစ်၏အထူးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ uPVC ၏ပေါင်းစပ် (unplastizide Poly ဗီနိုင်း Choride) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောရာသီဥတုအခြေအနေ (Complex တည်ငြိမ်မှု), ပစ္စည်းဥစ္စာကဆက်ပြောသည်သက်ရောက်မှုခုခံ (သက်ရောက်မှုပြုပြင်မွမ်းမံ), နေရောင်ကိုခံနိုင်ရည်ထို့အပြင်မှခံနိုင်ရည်သည်အဖြစ်အမျိုးမျိုး၏ဒြပ်ပေါင်းများ optimization ။ ဓါတ်ရောင်ခြည် (ခရမ်းလွန်တည်ငြိမ်ရေး)
အထပ်သား အိမ်ထဲ Wall မှလူကြိုက်အများဆုံးအထပ်သားမြို့ရိုးကို။ နေရောင်နှင့်တကွမိုဃ်းရွာအဖြစ်နံရံတစ်ခုသို့မဟုတ်ခက်သစ်သားကိုဆီးတားနိုင်ဘူး။ အမြားဆုံးအထပ်သားကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တတ်နိုင်သမျှနံရံတစ်ခုသို့ဘိလပ်မြေ, အထပ်သားနှင့်အထပ်သား။ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်မြင့်မားသောဖိအားနှင့်အတူ impregnated ခံရဖို့သစ်သား၏အပိုင်းပိုင်းရောစပ်ခြင်းအားဖြင့်။ ခြမကြာခဏကောင်းစွာ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ခြစ်ရာဖြစ်နိုင်သည်
gypsum ဘုတ်အဖွဲ့ ဖြစ်စဉ်မှတဆင့်မီးရှို့ felted ခံရသည့် gypsum ဖြစ်ပါသည်။ စေးကပ်စက္ကူသုံးပြီး mesh များနှင့်အထပ်သားတစ်စာရွက်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောသမားရိုးကျ gypsum ဘုတ်အဖွဲ့အဖြစ် applications များ, အမျိုးမျိုးကဲ့သို့တူညီသောအရွယ်အစား2နှစ်ဖက်ဖုံးလွှမ်းကြ၏။ အဆိုပါအဆောက်အဦးများအတွက်မြို့ရိုး, မီး-ခံနိုင်ရည် gypsum ဘုတ်အဖွဲ့။ gypsum အပူရောင်ပြန်ဟပ်မကြာခဏတစ်မီးဖိုချောင်မီးသို့မဟုတ်အိမျတျောကိုမီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူ 1-3 နာရီအပူခံနိုငျရနိုငျသညျ။ အဆိုပါလူမီနီယံသတ္တုပါးဘူပြန်တန်းစီ။ တစ်နေသာရိုးစုံလင်သော။ သို့မဟုတ်စွမ်းအင်ကိုကယ်တင်
flat စာရွက်ကျောက်ဂွမ်းစာရွက်များ၏က Wall အိမ်ထဲနှင့်ပြင်ပမှာနှစ်ဦးစလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာနေရောင်နှင့်တကွမိုဃ်းရွာကိုဆီးတားနိုင်။ ဒါပေမယ့်ကိုခံနိုင်ရည်ရှော့ခ်မဟုတ် ကျောက်ဂွမ်းစာရွက်များအားဖြင့်အထပ်သားနဲ့ဆင်တူကြည့်ရှုမည်။ ထိုအတတ်နိုင်
CELLOCRETE မြို့ရိုးကို CELLOCRETE (Cellocrete စာရွက်) gypsum နံရံများနှင့်ဆင်တူသည်။ ဘိလပ်မြေနှင့်ရောပျော့သစ်သားအမျှင်ကနေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထိုအခါ felted သဘာဝအခွတှစေားအဖြစ်အပူနှင့်သံကိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုစားကြဘူး patterned Surface ကအထွေထွေကဲ့သို့သော tool ကိုသုံးပြီးရိုက်သို့မဟုတ် sawed နိုင်ပါသည်။ နံရံနှစ်ခုလုံးအိမ်ပြင်နှင့်အိမ်တွင်းရှိနိုင်ပါသည်။
မြို့ရိုးအပြား၏အားသာချက်များ, နေရောင်အရိပ်အဆောက်အဦးကုလားကာမြို့ရိုးအပြားဖုံးလွှမ်း။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူတပ်ဆင်ရှိသေး၏။ အလွယ်တကူပြုပြင်ကြသို့မဟုတ်ဖြိုဖျက်နိုင်ပါသည်။ အဓိကအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဂိုးဘားမပါဘဲအိမ်သူအိမ်သားတစ်ခုထို့အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ နယူးအုတ်သို့မဟုတ်ကူညီပြီး ထိုအုတ်ရိုးမြေပြင်ပေါ်တွင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်, ကအခန်းကိုဖြည့်ဖို့အကာအရံမြို့ရိုးကိုတပ်များမှကန့်သတ်မှုနှင့်အတူနေအိမ်များများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲပစ်ရန်ခက်ခဲဖြစ်မည်အကြောင်း nice ဖြည့်စွက်။ ထို့အပြင်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြု အထူးအင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးလည်းရှိပါတယ်
သင်၏အကင်3Code ကိုသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည် rip နည်းလမ်းများ
ဆန်ခါကုဒ် XG ဆုတ်, G စိန်ကွက်အရွယ်အစားလှပါတယ်။ နှင့်စပါးပုံစံ 4.5 ၏စတင်ပစ္စည်းများ၏အထူ – ။6မီလီမီတာဥပမာ, အလေးချိန်ကြမ်းပြင်စင်္ကြံမှာကြည့်ပါ။ ဒီဇိုင်နာ၏လက်ရှိလူကြိုက်များ။ ပစ္စည်းရွေးချယ်ရေးသော့ချက် အဆောက်အဦးအလုပျ၏ဖွဲ့စည်းမှုထူဖြစ်ကြပြီးအလွန်ထူသောရှိခဲ့သည့် XG ဖုံးလွှမ်း။ ပစ္စည်းအတိုင်းအတာ Making (အချို့အဆောက်အဦးများမျက်နှာဖုံးများမျက်ရည်မျိုးဆက် G1 ဆန်ခါ) ။
XS ကုဒ်မျက်ရည်ကင်စိန်ကွက်ဆင်တူပါသည်။ ဥပမာအားလသာဆောင်ကဆြုံးအဘို့အအဝန်းမောလ်များ, ကော်ဖီဆိုင်များ (။ ရပ်ရွာမောလ်များ ဆန်ခါ 61) ဗားရှင်း XS ဝမ်းခွဲ
ကင် Code ကို S ကတစ်ကွက်ပုံစံရှိပြီးဝမ်းခွဲ။ 2.3 ကနေပစ္စည်းများ၏အထူ – ။3မီလီမီတာဆန်ခါလှပသောပုံစံများနှင့်အတူစုတ်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ နိမ်ရောဒရဲ့ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာကြက်အလှဆင်စတိုးဆိုင်များအဖြစ်အလှဆင်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြု, ကော်ဖီဆိုင်များ (ဥပမာသံလမ်းဘို့။ ဆန်ခါ) ကို S6 ၏ဗားရှင်းဝမ်းခွဲ
** နှစ်ခုကြီးမားသော 4’x8 ‘= 1,220×2,440 မီလီမီတာနှင့်အ 5’10’ = 1,525×3,050 မီလီမီတာသံမဏိကွက်ကင်မျက်ရည်နှင့်အတူသံမဏိမျက်ရည်သံကင်ဆန်ခါငှက်လမ်းပိုင်းအတူတကွ mesh ဖြောမျက်ရည်သံခွာ။ သံမဏိအဆောက်အဦမျက်နှာဖုံးဖောက်ထားသံမဏိ, လူမီနီယံမျက်ရည်မျက်ရည် Expanded သတ္တုတည်ဆောက်ခြင်းဆန်ခါလုံခြုံရေးခြံစည်းရိုးပြား။
#FacadeBuilding #FacadeDesign #CladdingMetal #CladdingWall #BuildingEnvelope #perforated မျက်နှာစာ #buildingenclosure #buildingskin #buildingfacade #buildingenvelop #Partition #Expanded #VentilatedCeiling # # မျက်နှာဖုံးအဆောက်အဦးများဝတ်အဆောက်အဦးများတည်ဆောက်ခြင်း # # # ဖယောင်းစက္ကူစာရွက်ဖောက်ထားစာရွက် # လူမီနီယမ် Composite ဖုံးလွှမ်းကြ၏။ ဝေးသတ္တုအလှဆင် perforated အဆောက်အဦ # # # သတ္တုဝတ်အဆောက်အဦးများဖုံးလွှမ်း Composite # # # မျက်နှာဖုံးအဆောက်အဦးမှာသုတျ။ # လူမီနီယမ်ပေါင်းစပ်။ အဆောက်အဦးဒီဇိုင်း # # ဆန်းသစ်သောဗိသုကာ # # အလှဆင်လူမီနီယမ်ပေါင်းစပ်လှေကားပုံစံ # # # သံမဏိလှေကားထစ်လက်ရန်း # # အလှဆင်လှေကားပုံစံ perforated ခဲ့ grooving ခဲ့အလှဆင် # ကိုဖုံးလွှမ်း။ အလှဆင်လက်ရန်း # အလှဆင်သံလမ်း # # # တံခါးများသံမဏိတံခါးကိုဥယျာဉ်တော်တံခါးဝ # # # အလှဆင်သတ္တုဥယျာဉ်ကိုအဆင်တန်ဆာ perforated ။ #partition ပုံစံ # Partition ခွဲအယ်ဒီတာ
14. HDG ။ ကလစ်ချုပ်ကိုင် panel ကိုဇယားကွက်သော့ခတ်ကလစ်သော့ခတ်ညှပ်ဆွဲထားဆန်ခါသံမဏိ။ သံမဏိ / သံမဏိဇင့်ချထားတဲ့, သံချေးခံနိုင်ရည်,
15 FormWork ဆက်ဆံရေးစနစ်: TieRod / ThreadBar ။ ခံနိုင်ရည်မြင့်မားတဲ့ဆန့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိ WingNut WaterStopper ။
# ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါသံမဏိဆန်ခါ, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်ပလပ်စတစ်ရဆေိုးလျတ်, # အဖုံး manholes ပြီးစီးသံအဖုံးများ, အပ်ချုပ်သူ, # FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, # ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE သွန်းလေ၏။ အဖုံး, #Swimming လျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်းဆန်ခါ, #Saddle ကလစ်ညှပ်သော့ခတ် Fastener, # optional ကိုသော့ခတ်ကလစ် #Leaf ထောင်ချောက်ဆင်ဘေးထွက်အဝေးပြေး Scupper သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းဝင်ပေါက်ကိုထိန်းချုပ်ရန်, # ဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများ, ကွန်ကရစ့်သတ်ထားခြင်းကိုသင်္ဂြိုဟ်အမှိုက်သရိုက်ဆန်ခါ, ထိုဆန်ခါပန်းကန်လုံလုံခြုံခြုံ။ အဆိုပါ footpath, Aquarium panel ကို # panel ကိုလိုက်ကာမီး #Egg သေတ္တာကင်ပျံ့ Divide ကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အလင်းကိုဒိုင်းလွှားကိုပါဝါခွဲခြား slat ။ နှာခေါင်းနှင့်ထောင့်တိအဖုံး panel ကိုလှေကားချော်, #Tree စောင့်တပ်ဖွဲ့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးခြစ် Frame က # -frame ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်ဒါပေမယ့်ငါးမွေးကန်, #Stair ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးကာကွယ်ပေးသူ # ဖုံး, #Perforated Pegboard Hook စင်ပေါ်သိုလှောင် Tools များ DIY Kit ယူပြီး ,. # Billboard Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ဖောက်ထားသံမဏိမြို့ရိုးကိုသိုလှောင်မှုကိရိယာများ, စာရွက်အခင်းများနှင့်နေသောလူသွားလမ်းဆွဲထားကြ၏။
ပလပ်စတစ်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်းကိုနှင်ထုတ်သံ, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, ဖိုင်ဘာဖန်, သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့အဖုံးကိုသံအဖုံးရဆေိုးချပစ် prefabricated, FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါပြီးဆုံးကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်ဆန်ခါလျတ်။ စမ်းရေတွင်းရေကူးလျှံယိုစီးမှုကင်, frame ကိုကင်တဲ့လမ်းဘေးထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်း, # ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ချိအနားမှာရှိတဲ့ Junk အစားအစာထောင်ချောက်များ၏ကင်ကိုအပိုင်းပိုင်းအပင်၏အအခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း, panel ကိုလိုက်ကာကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အလငျး / လေကြောင်း filtration / လေဝင်လေထွက် slat ။
GFRP Composite သံမဏိ Gully သည့်ကားလမ်းခြစ်ကင်, Culvert ပြွန်တုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းမြောင်းပြီးပုံသွင်းလွယ်သံ Manhole Grid Catch အင်တုံမျက်နှာဖုံးများပစ်ချအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသတ္တုခြစ်, Access ကိုကြမ်းပြင်လူသွားစင်္ကြပလက်ဖောင်းပေါ်, Yard လွှတ်ဆင်းလမ်း Edging အောကျခံခုံမှပေါက်ဖွားလာသူအကြီးစားတာဝန်ဆုပ်ကိုင် Struts Channel ကို, ဖောက်ထား Air ကိုစီးဆင်းမှုလူမီနီယမ်ကင်, Expanded ။ , ကာဗွန် serrated ဘားသံမဏိ, Fastener Clip ညှပ်ဆန့်သံမဏိပြား lock Saddle သော့ခတ်, ကင်, Formworks Tie လှံတံ Wing Nut, ဦးထုပ်ကျဇယားအဆိုပါအကြံပေးအဖွဲ့လူကိုအပေါက်ကိုလက်နှင့်-Holstein ပိတ်အဖုံး, သံ, ပိုက်ထုပ်အမျှင်ဓာတ်ပေါင်းစပ်စေးကိုနှင်ထုတ်ကုန်။ , အဖုံး, အဖုံး filter ကိုမိလ္လာကန်ပိုက်, manholes, manhole ဖုံးမိလ္လာရေ, ဦးထုပ်နယ်ပယ်။ အစိုင်အခဲစတုဂံအပေါက်, ဘိလပ်မြေ, သံမဏိစွန့်ပစ်စုဆောင်းခြင်းများအတွက်ကွန်ကရစ်အဖုံး, ဖုံးနဲ့ရေကုသမှုစနစ်များကိုအားဖြည့်ခြင်းမရှိပါ;ဆန်ခါ, ဂရိတ်အရသာ, သံမဏိကင်အဖုံးချက်ချင်း access ကို, ဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်။
ပျဉ်ပြား, အပေါက်တွေ, ရေ, သံမဏိဝါယာကြိုး, jig အပေါက်, ဆန့်သံမဏိ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, texture trotters, ကြက်သားသီချင်းများခေါက်, ဖြတ်အတူလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်စင်္လှံတံရွှေ့ပြောင်းခံရဦးရေနုတ်မြောင်းမြောင်း, matrix ကိုပျက်ကွက်, ဝါယာကြိုးကွက်, ဝါယာကြိုးကွက်။ ရေနုတ်မြောင်း, အနံ့ကြောင့်စလစ်, သံလမ်း, mini ကိုအသားတင်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုခင်း, အပြင်ပန်းအလှဆင် Koi ကန်, Landscaping, ကြွေပြား, အခင်း, ပစ္စည်းကိရိယာများအဆင့်မြှင့်, DIY တပ်ဆင်ခလွယ်ကူသောအရှိန်မြှ။ သူ့ဟာသူ, မီးခွက်, embedded မျက်နှာကြက်ကို T-bar ကိုကင်တပ်ဆင်ထားသည်။ နံရံတစ်ခုပေါ်တွင်မျက်နှာကျက် tile ကိုဒီလိုပါပဲအလင်း gauzy ကုလားကာမြို့ရိုး။ ခြံစည်းရိုး panel ကအခန်းတစ်ခန်း Divide partition ကို။ utility အလှဆင်မျက်နှာကျက်မြတ်သောအပတ္တာ slat လိုက်ကာ Fiat အာရဇ်ပင် pergola ညေ, အကာအကွယ်ကွက်အဖုံးငှက်, မြွေ, ငှက်, ရှဉ့်နှင်ထုတ်ခြင်းနှောက်ခြောက်ခေါင်း, partition ကိုပြားစညျးဝေးပှဲ။ မွေ့လျော်, polycarbonate, ဗီနိုင်း, ရုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရုံး, ရေချိုးခန်း, လေအေးပေးစက်စနစ်, ဝါယာကြိုးတစ်ဦးကအခန်း Divide, High-grade ကိုပယ်ပြီး frosted ။ ထိုက်တန်အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, လေဝင်လေထွက်ကင်အမှတ်တရ Panel များနေကာမျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, Splashboard / Weatherboard / Slat လိုက်ကာ / Trellis အရိပ်, ဆိုင်းငံ့ ,.ရုံးနေရာတွေ, အစည်းအဝေးအခန်းတစ်ခန်း, စူပါမားကတ်, ကျောင်း, စင်္ကြံ, အိမ်သာ, ဆေးရုံ, Re-အလှဆင်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်း, မျက်နှာကျက်အုပ်ကြွပ်: ရောင်စုံအထွေထွေ Sun က Screen ကို Partition ခွဲ, Anti-Bird ကိုထိန်းချုပ်ရေးခွငျထော, Mini ကိုအလှဆင်ခြစ်ကုလားကာ, ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်လျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်။ ကုလားကာမြို့ရိုးကို အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးကိုခေါက် Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA, တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းသည့်ကားလမ်းခြစ်, footbath အနီးရှိဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်း, အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံယိုစီးမှုအသွားအလာကိုခြစ်။ ရုံးနေရာတွေ, အစည်းအဝေးအခန်းတစ်ခန်း, စူပါမားကတ်, ကျောင်း, စင်္ကြံ, အိမ်သာ, ဆေးရုံ, Re-အလှဆင်အကျင့်ကိုကျင့်, ကုလားကာနံရံမျက်နှာကျက်အုပ်ကြွပ်: ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်လျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးကိုခေါက် Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA, တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းသည့်ကားလမ်းခြစ်, footbath အနီးရှိဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်း, အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံယိုစီးမှုအသွားအလာကိုခြစ်။ ရုံးနေရာတွေ, အစည်းအဝေးအခန်းတစ်ခန်း, စူပါမားကတ်, ကျောင်း, စင်္ကြံ, အိမ်သာ, ဆေးရုံ, Re-အလှဆင်အကျင့်ကိုကျင့်, ကုလားကာနံရံမျက်နှာကျက်အုပ်ကြွပ်: ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်လျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးကိုခေါက် Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA, တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းသည့်ကားလမ်းခြစ်, footbath အနီးရှိဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်း, အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံယိုစီးမှုအသွားအလာကိုခြစ်။ ကုလားကာမြို့ရိုးအပြား, မျက်နှာကျက် အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးကိုခေါက် Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA, တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းသည့်ကားလမ်းခြစ်, footbath အနီးရှိဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်း, အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံယိုစီးမှုအသွားအလာကိုခြစ်။ ကုလားကာမြို့ရိုးအပြား, မျက်နှာကျက် အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ပတ္တာ pergola မြို့ရိုးကိုခေါက်Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA, တုတ်ကျင်းရေနုတ်မြောင်းသည့်ကားလမ်းခြစ်, footbath အနီးရှိဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်း, အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံယိုစီးမှုအသွားအလာကိုခြစ်။ကျွမ်းကျင်သူများကပလပ်စတစ် primer, PP PVC PE ကို ABS ရေကူးပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, အစားထိုးဖန်အတားအဆီးမျက်နှာဖုံးစျေးဆိုင်, အဆောက်အဦးများ, မြို့ရိုး, အပြင်ပန်းဝတ်, စာရွက်အခင်း, ဖို့အတွက် walkway, ခြေလျင်ခင်းများနှင့်ရိုးရာ Park က။ field ဇာတ်စင်ပြိုင်ပွဲ, မြက်ပင်လုပ်ကွက်, ပန်းကန်, အလှဆင်မြို့ရိုးအပြား, အပြင်ပန်းလိုက်ကာ, မျက်နှာကျက်, မြို့ရိုး, eaves, gabled ရှေ့မုတ် Calais Partition ခွဲတံခါးများယုဒလူရဲ့အစောင်းများနှင့်ဖယောင်းစက္ကူစာရွက်အရွယ်အစား stairs ။ ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။ သံချေး, ချေး, အပူ, မီး, အက်ဆစ်, အယ်လကာလီဓာတုပစ္စည်းမှခံနိုင်ရည်လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, ဖွဲ့စည်းမှု, အက်ဖ် RP, စွမ်းအင်ကယ်တင်တော်မူ၏။ ခြ, မှို, ဖောကြိုက်နှစ်သက်မ Non-အဆိပ်မဟုတ်သောမီးနှောင့်နှေး, ဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ်ဖန်ဖိုင်ဘာအထူးဖြစ်ပါသည်, Siam SSG, အမေရိကန်, အမေရိကန်, အာရှပစိဖိတ်, Fibergrate, Strongwell, Webforge, အခင်းပြုပြင်, ဖျင်မျက်နှာပြင် Knack ။ , epoxy, အီးလွယ်ကူ Pot, အီးက c ရလွယ်ကူ Pot, epoxy ခင်း။Polyurethane, PVC, ကော်, ဇီဝ, ဇီဝ, PU ကွန်ကရစ်, အပေါ်ယံပိုင်း, ကျောက်ခက်, PE စက်ရုံကြမ်းပြင်စားသောက်ဆိုင်, ဟိုတယ်မီးဖိုချောင်, coated ရေတွင်းများ, ဓာတုယဉ်, acrylic သုတ်ဆေး, အခင်းစက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ , အက်ကြောင်းရေစိုခံတာ, အပေါ်ယံပိုင်း, ရေစိုခံတာ, ကုန်းပတ်, ရေကူးကန်ဓာတုပစ္စည်းမြောင်းဖိုင်ဘာဖန်, အိမ်ခေါင်မိုးစာရွက်သတ္တုအခြားရွေးချယ်စရာပစ္စည်းများ, သံမဏိ, ကျောက်, သစ်သား, အတု, ဒြပ်, wpc ပလပ်စတစ်, ဇီဝပြုပြင်။ ပြန်လည်ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ယိုစီးမှု, ခေါင်မိုးယိုစီးမှု, အခင်း, ဝတ်ဆင်, သက်ရောက်မှု, တောင်းဆိုမှုကိုန်းကျင်လျတ်မြောင်း။ အဆိုပါယဇ်ပလ္လင်ပတ်လည်ရေကူးကန်, စာရွက်များ, Shutter, စာရွက်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ဖုံး, စက်ပစ္စည်း, pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်, အဆောက်အဦးများ, ဘလောက်ခင်းလုပ်ကွက်, တီကောင်မြက်-ချောခင်း။ Feng Shui မွမ်းမံ artificial အလင်း, wpc ပလပ်စတစ်, ဇီဝ, ပြန်လည်, ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ရေနုတ်မြောင်း, အိမ်ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, မျက်နှာပြင် wear, သက်ရောက်မှု, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်မြောင်းလျတ်, စာရွက်များ, Shutter, စာရွက်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ဖုံး။ ယဇ်ပလ္လင်ကိုစက်ယန္တရား, pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်, အဆောက်အဦးများ, ဘလောက်ခင်းလုပ်ကွက်, တီကောင်မြက်-ချောခင်း။ Feng Shui မွမ်းမံ artificial အလင်း, wpc ပလပ်စတစ်, ဇီဝ, ပြန်လည်, ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ရေနုတ်မြောင်း, အိမ်ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, မျက်နှာပြင် wear, သက်ရောက်မှု, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်မြောင်းလျတ်, စာရွက်များ, Shutter, စာရွက်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ဖုံး။ ယဇ်ပလ္လင်ကိုစက်ယန္တရား, pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်, အဆောက်အဦးများ, ဘလောက်ခင်းလုပ်ကွက်, တီကောင်မြက်-ချောခင်း။ Feng Shui မွမ်းမံချေးခုခံဘောင်, ရာဇမတ်ကွက်, မိုးသေနတ်သမားရေအမှိုက်ပုံးထဲထိန်သိမ်းဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကို, လေပြန်နှင့်အပေါက်တွေများအတွက်အဖြူရောင် Polystyrene ဥသေတ္တာ။ ခြစ်အလင်းကိုသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ အလှဆင် Box ကိုငါး EggCrate အလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver ,. အဆိုပါ LED မီးခွက်သည် / အလင်းပြန်မှုစိန့်ကနေအလင်းပိတ်ဆို့ဖို့နေရာခြားတစ်ဦး panel ကိုဇယားကွက်ဖန်တီး terrarium vivariumအဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကအခန်းတစ်ခန်း Divide မြို့ရိုးကိုဖွဲ့စည်းပုံသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ box ကိုကွန်တိန်နာ, ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် FRP ထုတ်ကုန်များ, GFRPS, Glass ကို Fiber စစ်ကူသံဘောင်များကို Polymer အမျိုးအစား, စစ်ကူဖန်မျှင်ထည်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ, Composite အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ဗီနိုင်း Ester စေး, အမြစ်ပင်စည် bollards ပင်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့။ အလှဆင်အတွက်လမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုပန်းပု, Landscaping ပြင်ပဥယျာဉ်ကြီးသစ်ပင်ခြစ်, သစ်ပင် Ring ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver Frame ကဖုံးလမ်းသွားလမ်းလာ, လမ်းမလမ်း, ပုံသွင်း, pultrusion, welded bearing bar ကိုဝင်းခြစ်ဖုံးအုပ်, profile များကို pultuded ,.